फ्लोरिडा मारिजुआना कानून - सनशाइन राज्य मा मारिजुआना लाइसेंस
फ्लोरिडा भांग वकील
क्यानाबिस ब्यापार वकीलले फ्लोरिडामा मेडिकल मारिजुआना कानून सम्बोधन गर्दछ
यो पोडकास्टमा सुन्नुहोस् वा फ्लोरिडा क्यानाबिस कानूनमा युट्यूब हेर्नुहोस् विशेष फ्लोरिडा क्यानाबिस वकीलको लागि जुन हामी अन्तर्वार्ता लिन्छौं - हेर्नुहोस्। श्री क्यानाबिस कानून, डस्टिन रोबिनसन, आफ्नो वेबसाइट मा: श्री Cannabislaw.com
फ्लोरिडा क्यानाबिस / मारिजुआना कानूनको स्थिति
"फ्लोरिडा क्यानाबिस कानून" अत्यधिक बुढेसकाल र रूढीवादी जनस population्ख्याबाट पीडित छ जुन अझै गाँजासम्बन्धी अनौंठो कलंक राख्छ, जसलाई फ्लोरिडा राज्यमा कानुनी रूपमा मारिजुआना भनिन्छ। फ्लोरिडामा लगभग ,300,000००,००० बिरामीहरूको साथ एक मजबूत मेडिकल मारिजुआना कार्यक्रम छ। फ्लोरिडामा मारिजुआनाको पूर्ण वैधानिकरण सम्भवतः मतपत्रको पहलबाट उत्पन्न हुनेछ किनकि यसको मेडिकल मारिजुआना कानून आयो - २०२२ खोज्नुहोस् फ्लोरिडामा मारिजुआनालाई वैधानिक बनाउने मतमा।
सम्बन्धित पोस्ट: तपाइँको ब्यापारको लागि क्यानाबिस वकिललाई कसरी हायर गर्ने
यस अनुसार वर्तमान फ्लोरिडा भांग कानून, थोरै मात्रामा गाँजा पनि यस राज्यमा अवैध छ। अधिकारीहरूले २० ग्राम वा कम गाँजा समात्नु गलत कार्य हो भनेर दाबी गर्छन्। यी वर्तमान फ्लोरिडा भांग नियमन नियमहरू छन्।
भविष्यमा कसरी परिवर्तन हुन्छ, र के हामी फ्लोरिडा भांग नियमहरूमा केही परिवर्तन देख्न सक्दछौं? यस समयमा, हामी फ्लोरिडामा भांग कानूनहरूको इतिहास देख्न सक्छौं। मेडिकल मारिजुआना यस राज्यमा वैध हो, जबकि फ्लोरिडामा मारिजुआनाको मनोरञ्जनकारी प्रयोग अझै प्रश्नको अधीनमा छ।
वर्तमान फ्लोरिडा क्यानाबिस कानून के हो?
यदि तपाईंसँग २० ग्राम वा कम गाँजा छ भने, तपाईंलाई अधिकतम $ १,००० जरिवाना लगाउन सकिन्छ। तपाईं स्थानीय देशको जेलमा पनि अधिकतम एक बर्षको सजाय पाउन सक्नुहुन्छ। यस किसिमको दुष्कर्म एक अपराधी भन्दा कम गम्भीर छ। गम्भीर रोगको लागि योग्य हुन, तपाईसँग २० ग्रामभन्दा बढी गाँजा हुनुपर्छ।
यदि तपाई मारिजुआना बेच्नुहुन्छ भने नतिजा ठूलो हुन्छ। यो एक स्कूल, कलेज, पार्क, वा अर्को अपराधी दण्डनीय क्षेत्र निर्दिष्ट क्षेत्र को 1,000 फिट भित्र क्षेत्रहरु मा लागू हुन्छ। तपाईं अधिकतम १०,००० डलर र अधिकतम १ 10,000 बर्षको सजाय पाउन सक्नुहुन्छ। यी फ्लोरिडामा मारिजुआनाको कब्जा र वितरणको लागि हालका नियमहरू छन्।
नियमहरू विशाल संशोधन अन्तर्गत छन्, विशेष गरी किनभने फ्लोरिडा मारिजुआना उद्योग परिवर्तन गर्न सक्ने बिलहरूको सूचीको कारण। फ्लोरिडा सर्वोच्च अदालतले २०२० को अन्त्य सम्म फ्लोरिडामा मारिजुआनाको नियामक नियमहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो।
२०१ 2016 मा, फ्लोरिडाका %०% मतदाताले संवैधानिक संशोधनको हिस्साको रूपमा मेडिकल मारिजुआनालाई कानुनी मान्यता दिए। २०१ 70 को अन्त सम्ममा, मेडिकल मारिजुआनालाई खाद्य, गोली, तेल, र भापहरूको रूपमा कानुनी मान्यता दिइयो। यो फ्लोरिडा बिरामीहरु को लागी एक ठूलो कदम थियो जो बिभिन्न चिकित्सा सर्तहरुका लागि मेडिकल मारिजुआना प्रयोग गर्न चाहान्थे।
फ्लोरिडामा भांगको खेती उद्योगमा मानक बन्न गयो। यो २०१ from देखि कृषि र उपभोक्ता सेवा कार्यक्रमको हिस्सा थियो। यसले यस राज्यको तथाकथित "हरियो भीड" निम्त्यायो जसले सानो र मध्यम आकारका व्यवसायका लागि धेरै विकल्पहरू सिर्जना गर्‍यो।
अब २०२० मा, घोषित बिलहरूले फ्लोरिडामा मारिजुआना कानूनीकरणको लागि पहललाई समर्थन गर्दछ। पहलका धेरै समर्पित समर्थकहरू छन्, र आधिकारिक कानून पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुने क्रममा छ।
फ्लोरिडामा कुन भांग कानुन २०२० मा परिवर्तन हुनेछ?
फ्लोरिडामा मारिजुआनाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग २०२० देखि सम्भव हुनेछ भन्ने प्रशस्त भविष्यवाणी गरिएको छ। यो फ्लोरिडा मारिजुआना आधिकारिक पहलबाट गरिएको घोषणा हो। तिनीहरूको दाबी छ कि मारिजुआनाको मनोरन्जनकारी प्रयोगले उद्योगको सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
धेरै कम्पनीहरूले डिस्पेंसरी र स्टोरहरू खोल्नेछन् जहाँ भांग उत्पादनहरू किन्न सम्भव छ। यसले किसान, उत्पादकहरू, र विक्रेताको लागि व्यापार अवसरहरू बढाउनेछ।
उही समयमा, २०२० को अवधिमा, राम्रो परिस्थितिहरूमा गाँजाको प्रयोग दिग्गजहरूका लागि सम्भव हुनेछ। इजाजतपत्र धारकहरू बिचौलियाविना नै उत्पाद बढ्न, प्रक्रिया गर्न, परीक्षण गर्न र बिक्री गर्न सक्षम हुनेछ। रोगहरूको विस्तारित सूची मेडिकल मारिजुआनाको सम्भावित उपचारका लागि थपिनेछ। र गाँजा कब्जाको लागि हालको दण्ड अदालतले पुनर्विचार गर्दछ।
यी सबै परिवर्तनहरू २०२० मा आउँदैछ। नयाँ फ्लोरिडा भांग नियमहरू फ्लोरिडाका बासिन्दाहरूको लागि ठूलो परिवर्तन हुनेछ जो कानुनी रूपमा मारिजुआना प्रयोग गर्न चाहन्छन्।
जति चाँडो त्यति राम्रो
फ्लोरिडा भांग कानूनीकरण नियमले यस राज्यको समग्र मारिजुआना परिप्रेक्ष्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। अहिलेसम्म ११ राज्यले २१ बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूको लागि मारिजुआनालाई कानुनी मान्यता दियो। मारिजुआना use 11 राज्यहरूमा चिकित्सा प्रयोगको लागि कानुनी हो।
भविष्यमा हामी समग्र मारिजुआना उपभोग दरमा वृद्धि देख्नेछौं। विशेष गरी बिरामीहरुमा जो चिकित्सा उद्देश्यका लागि मारिजुआना प्रयोग गरिरहेका छन्। फ्लोरिडाका बासिन्दाहरूले २०२० को अवधिमा सबै बिलहरू लिने हो भने मनोरञ्जनको लागि गाँजा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
फ्लोरिडाले मारिजुआना उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको लागि ढोका खोलिरहेको छ, र यो प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ। खेती, औषधालय, र वितरण व्यवसाय र साना कम्पनीहरु को लागी ठूलो अवसर ल्याउनु पर्छ। फ्लोरिडामा मारिजुआना कानुनीकरणको साथ हामी कानुनी रूपमा गाँजा किन्न र प्रयोग गर्न पनि सक्षम हुनेछौं। यो फ्लोरिडा भांग कानून परिवर्तनको एक ठूलो कदम अगाडि हुनेछ।
आज हामी सबै फ्लोरिडा भांग कानुनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सबैलाई नमस्कार, मेरो नामको टोम हावर्ड। यदि तपाईंलाई केहि पनि आवश्यक छ भने, तपाईं गुगल क्यानाबिस वकील सक्नुहुन्छ र तपाईं मलाई फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ। तर आज हामीसँग एक धेरै विशेष एपिसोड छ। हामी डस्टिन रोबिन्सनसँग फ्लोरिडा भांग कानूनहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं। डस्टिन, हामीलाई सामेल गर्नका लागि धन्यबाद।
डस्टिन रबिन्सन - फ्लोरिडामा शीर्ष क्यानाबिस वकील
हो, तपाइँ त्यो भूमिका कसरी जान्नुहुन्छ। भाग्यवस हामी अघि भन्दा धेरै राम्रो गरिरहेछौं। जे भए पनि, त्यस्तै हुन्छ जब तपाईंसँग तट कार्यक्रमको लागि शो छ। तपाईं डस्टिनबाट कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ?
म यहाँ फ्लोरिडामा छु। म सनी दक्षिण फ्लोरिडामा छु। यहाँ राम्रो मौसम छ।
त्यसोभए तपाईं फर रेन्टेड प्यान्ट लगाउनुहुन्न जस्तो म हुँ। किनकि यो २ 25 डिग्री बाहिर छ।
हो, होइन, यो सुन्दर छ। हिजो म डु the्गामा बाहिर थिएँ। आजको कामको दिन विन्डोको ठीक बाहिर सुन्दर धूप।
कस्तो प्रकारको चीजहरूमा तपाई फ्लोरिडा भांगमा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
फ्लोरिडामा क्यानाबिस कानूनहरू के भइरहेको छ?
हामीले फ्लोरिडामा यहाँ धेरै चीजहरू गइरहेका छौं, स्पष्ट छ कि भँसामा भइरहेको सामग्रीलाई गन्ती गर्दैन। हामीसँग गाँजा पक्षमा धेरै सामानहरू छन्। यहाँ फ्लोरिडा मा केवल एक छिटो इतिहास। हामीले धेरैलाई इजाजत पत्र दियौं, हामी के भन्छौं MMTCs तल, मेडिकल मारिजुआना उपचार केन्द्रहरू। ती यहाँ ठाडो रूपमा एकीकृत इजाजत पत्रहरू फ्लोरिडामा छन्। तिनीहरू स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेन्स प्राप्त थिए। र त्यस पछि त्यहाँ फ्लोरिडामा धेरै मुद्दाहरू थिए। त्यसैले मूल रूपमा अहिले हामीसँग २२ लाइसेन्सहरू छन् र ती इजाजतपत्रहरूको एक विशाल बहुमत सम्झौता सम्झौता मार्फत प्रदान गरिएको थियो, [क्रसट्यालक 22:00:01] बाहिर, फेरि भन्नुहोस्।
यो चाखलाग्दो छ, किनकि यहाँ इलिनोइसमा उनीहरू कसरी राज्यको बारेमा मुद्दा चलाउन बजेट ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्दै थिए र उनीहरूसँग अतिरिक्त लाइसेन्सहरू छन् जुन प्रकारको वैधानिक अधिकतममा निर्मित छ। त्यसोभए म सोचिरहेको छु कि धेरै सम्झौता सम्झौताहरू इजाजतपत्रहरूको लागि हुनेछन्?
हो, यो ठीक छ, म भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि राज्यले कुनै पनि इजाजतपत्र गरिरहेको छ भनेर मुद्दा दायर गर्न महत्वपूर्ण संसाधनहरू छुट्याउनु पर्छ। मलाई थाहा छ मिसौरीले भर्खर उनीहरूका विजेताहरूको घोषणा गरे। म मिसौरी अनुप्रयोगहरूमा र केहि राम्रो अनुप्रयोग लेखकहरूमा टिमको एक जोडीसँग काम गर्दै थिएँ, जब उनीहरूले यसलाई ड्राफ्ट गर्दै छन्, तिनीहरू यसलाई ड्राफ्ट गर्दै छन् ताकि तिनीहरू आफैंलाई सेट अप गर्न सक्दछन् जहाँसम्म उनीहरूले कार्यको एक कारण ल्याउन सक्षम हुनेछन्। इजाजत पत्र प्राप्त नगर्नुहोस्। त्यसोभए यो वास्तवमै एक रणनीति हो जुन धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्। र यहाँ फ्लोरिडामा इजाजत पत्रहरूको यति उच्च मूल्य थियो। मेरो मतलब हामीसँग छ-
फ्लोरिडामा क्यानाबिस व्यवसायहरूको ठाडो एकीकरण
हो त्यसोभए तपाईंले पाउनुहुनेछ ... कागजको टुक्रा selling 60 मिलियनमा बेच्दै थियो। त्यो हो, कुनै घर जग्गा, कुनै अपरेशनहरू छैनन्। यस लाइन मा यति धेरै संग, मान्छे लाई $ 1 मिलियन लाइसेन्स प्राप्त गर्न को लागी वकील को फीस मा paying 50 लाख भुक्तान मन छैन। जबकि अन्य राज्यहरूमा लाइसेन्सको मान त्यति उच्च नहुन सक्छ। यदि तपाईंसँग कागजको मूल्यको टुक्रा छ भने मानौं, $ 500,000 वा एक मिलियन, तपाईं एक वकील भुक्तानी गर्न कम झुकाव हुन सक्छ यसमाथि केहि सयौं भव्य मुकदमा। तर जब इजाजतपत्र 50 करोडको हुन्छ, तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, "तपाईंलाई के थाहा छ, म यसमा मेरो स्विing लिन्छु।" र कहिलेकाँही अन्य व्यक्तिहरु त्यो मुकदमा लगानी गर्छन् कि अवसरहरु लाई हेरिरहेका छ -
एकछिन पर्ख। र त्यो होइन ... होईन, त्यो सत्यता होइन। यो के हो जब, प्रतीक्षा गर्नुहोस् ... शैम्पर्टी त्यो चम्पर्टी हो र दुर्भाग्यवस हामीले केही आर्केन कानुनी सर्तहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिहरू, तपाईंलाई त्यसो गर्न अनुमति छैन। यो वैध रूपमा एक चीज, champerty र रखरखाव हो। ठीक छ, सिद्धान्तमा तपाईले चैम्पर्टी गर्न सक्नुहुन्न मान्नु भनेको मुद्दा दायर गर्नको लागि दूरी पार्टीको बीचमा मध्यस्थता झैं हो। खैर कि रखरखाव यो छ। तर यो मूलत: समान किसिमको हो जहाँ कोही हैन जुन त्यो व्यक्ति जो मुद्दासँग सम्बन्धित छ त्यो उसमा आर्थिक चासो छ। त्यसोभए मलाई लाग्छ कि उनीहरूले फ्लोरिडामा चेम्पर्टीलाई अनुमति दिन्छन्?
मैले वास्तवमा त्यो शब्दावली कहिल्यै सुनेको थिइन। तर मेरो मतलब, दिनको अन्त्यमा, प्राय: त्यस्तो समयहरू हुन्छन् जहाँ मानिससँग मुद्दा हाल्छ र उनीहरूले पैसा तिर्न सक्दैनन् र अन्य मानिसहरू कुनै चीजको लागि विनिमयमा मुद्दा चलाउन पैसा दिन आउँदछन्। त्यसो हो, मलाई लाग्छ कि चेम्पर्टी कुरा सम्भवतः यसमा बढी केन्द्रित छ।
ओह, यो सामन्ती समय बाट हो-
तर त्यसोभए तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि त्यहाँ केहि अयोग्यता हुनेछ यदि तपाइँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र तपाइँ मानिसहरूलाई मुद्दा हाल्न फाइलहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः त्यो त्यो हो जुन लक्ष्य गरिएको थियो, तर यो त्यस्तो उदाहरण हो जहाँ व्यक्ति मुद्दा हाल्न चाहन्छन। तिनीहरूसँग केवल $ 1 मिलियन खर्च गर्न पूंजी थिएन। त्यसोभए तिनीहरू भित्र पसे र लगानीकर्ताहरू भेट्टाए जसले केहि इक्विटीको बदल्मा मुद्दा दायर गर्न इच्छुक थिए। र त्यसपछि तिनीहरूले इजाजतपत्र प्राप्त गरे र यसलाई $$, $ million मिलियनमा फ्लिप गर्न सक्षम भए। स्पष्टतः अब तिनीहरूले जारी गरे… तिनीहरूले भर्खर एक सम्झौताको माध्यमबाट आठ नयाँ लाइसेन्स जारी गरे। तिनीहरूलाई एक सूचक भनिन्छ। यी ती व्यक्ति हुन् जसले प्रारम्भिक अनुप्रयोग प्रक्रियामा एक बिन्दुमा रन बनाए। त्यसोभए अहिले हामीसँग २२ वटा आठ वटा लाइसेन्स छन् जुन एकदम नयाँ छन् र तिनीहरू ठाडो रूपमा एकीकृत कम्पनी चलाउन पूंजी बढाउन कोशिश गरिरहेका छन्। [क्रिस्टलक 55:60:22] यसको लागत $ २० मिलियन छ।
जब तपाईं ठाडो भन्नु हुन्छ, तपाईंको मतलब तिनीहरू बढ्छ, कि तिनीहरू भण्डार गर्छन्, कि तिनीहरू प्रक्रिया गर्छन्, तिनीहरू सबै एकै हुन्, ठीक छ? र त्यो फ्लोरिडा को लागी संरचना हो।
हो, त्यसोभए फ्लोरिडामा के पागल हो उनीहरूसँग हुनु पर्छ, तिनीहरूले बढ्नुपर्दछ, प्रक्रिया गर्नुपर्दछ, वितरण गर्नुपर्नेछ र डेलिभर गर्नुपर्नेछ। र तपाईं त्यस मध्ये कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो यस्तो छैन जस्तो कुनै डेलिभरी कम्पनीहरू छन् जसले डिलिभरी गर्दै छन्। प्रत्येक व्यक्तित्वको आफ्नै डेलिभरी सेवा हुन्छ। र तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यो धेरै असक्षम हुन्छ यदि तपाईंसँग दुई अर्को छिमेकीहरू एक अर्काको छेउमा छन्। एउटा एउटा औषधालयबाट अर्डर गर्दैछ, अर्कोले अर्को डिस्पेन्सरीबाट अर्डर गरिरहेको छ र तपाईसँग दुईवटा कारहरू पनि छन् निकटतामा पुग्नका लागि। यदि त्यहाँ कुनै वितरण सेवा रहेको छ भने ती दुबै डिस्पेन्सरीजहरूलाई एक कारमा लिनका लागि सक्षम भएको भए यसले अझ राम्रो बनाउँदछ। र यसैले त्यहाँ केही अक्षमताहरू छन् र त्यहाँ अर्को विधेयकको केही बिलहरू छन् र उनीहरूले आंकडा खोज्दै थिए। त्यहाँ वास्तवमा फ्लोरिडा सर्वोच्च अदालत छ, त्यसैले तल्लो अदालतहरूले वास्तवमा त्यो संरचना हाम्रो फ्लोरिडा संविधानको बिरूद्ध मान्दछ।
फ्लोरिडा के गर्‍यो, किनकि फ्लोरिडा कसरी मेडिकल मारिजुआना राज्य भयो भन्ने कुरा गरौं।
फ्लोरिडामा कसरी मेडिकल मारिजुआना सुरु भयो
फ्लोरिडा पहिले हामीसँग एक विधान थियो जुन मूलतया मात्र ज्यादै कम छ, THC मारिजुआना-
यो धेरै वेस्ट भर्जिनिया जस्तै लाग्यो। हामी पछाडिको कुरा गर्दै थियौं, वेस्ट भर्जिनिया, तपाईले फूल लिन सक्नुहुन्न, तपाईले भाप पनि पाउन सक्नुहुन्न, धूम्रपानको केही पनि छैन र तपाइँ प्रक्रिया गर्नु पर्छ। फ्लोरिडा कसरी सुरु भयो? तपाईंलाई फूल लिन अनुमति थिएन?
हो त्यसो भए फ्लोरिडाको, म अहिले वेस्ट भर्जिनिया अनुप्रयोगमा काम गर्दैछु र हो, त्यस्तै वेस्ट भर्जिनिया यस्तो देखिन्छ। र हो, फ्लोरिडा धेरै, धेरै सरल र कम खुराकको साथ मात्र शुरू भयो। तर हामीले मूल रुपमा के गरेका छौं भन्ने हो, त्यहाँ संवैधानिक संशोधन थियो। संवैधानिक संशोधनले मूल रूपमा भने कि यी एमएमटीसीहरू, मेडिकल मारिजुआना उपचार केन्द्रहरू बढ्न, प्रक्रिया गर्न, वितरण गर्न वा वितरण गर्न सक्दछन्। त्यसोभए यो शब्द थियो वा हाम्रो फ्लोरिडा संविधानमा। र त्यसपछि २०१ 2017 मा जब विधायक त्यो संवैधानिक संशोधन लागू गर्न गए, तिनीहरूले यसलाई बोलाए ... तिनीहरूले भने कि यो बढेको थियो, प्रक्रिया थियो, वितरण र वितरण गर्न, अनिवार्य रूपमा यो ठाडो एकीकृत इकाई बनाउनु जुन ती सबै गर्नु पर्ने थियो।
कन्जेक्टिभ र अनिवार्य बिज्ञापन बीचको भिन्नता। तिनीहरू मध्ये एक कन्जेक्टिव हो र अर्को हो, म निश्चित छु कि उनीहरूले यसलाई के भन्छन्।
कन्जेक्टिभ / डिजेन्जेक्टिभ र फ्लोरिडा मारिजुआना कानून
हो, मलाई यस अदालतको केसको बारेमा धेरै सोधिएको छ र [सुन्न नसक्ने 00:07:38] र कसैको जस्तो, "ओह, यो धेरै जटिल छ। मलाई कानूनी सामानहरू जान्नु आवश्यक पर्दैन। ” म जस्तो छु, "होइन, यो धेरै सरल छ। यो एक र वा बिचको भिन्नता हो। संविधानले यो शब्द प्रयोग गर्दछ वा जसको अर्थ तपाइँ कि त खेती, प्रक्रिया, वितरण वा वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। फ्लोरिडा कानुन आयो र शब्द प्रयोग गर्‍यो, जसको मतलब इकाईले मूल रूपमा ती सबै चीजहरू गर्नुपर्दछ। " अहिले अहिल्यै फ्लोरिडा सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा लिइरहेको छ र सबै संकेतहरू ती स ruling्केतलाई औंल्याउँदै छन् कि त्यो फैसलाको पुष्टि गर्दै, जसको मूलरूप खडा एकीकरण भत्किने थियो र तिनीहरू यहाँ फर्केर आउनुपर्नेछ र तल नै एक क्षैतिज संरचना सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
यो कन्जेक्टिभ बनाम डिजेन्क्टिभ हो। त्यसैले कन्जुक्टिभा हो र, र डिसजेन्क्टिभ वा हो। होइन मलाई यो मनपर्‍यो। यो यस्तो छ, किनभने यो यसको मूल हो। हामी कानुनी दृष्टिकोणबाट क्यानाबिस कानूनीकरणको बारेमा नीति दृष्टिकोणबाट विपरित कुरा गर्छौं। तर त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन कुराकानीमा चल्दछ। र यस्तै फ्लोरिडा वा इलिनोइसमा जस्तै हामीसंग पनि मुद्दा हाल्ने छ र तपाईले शव्दको अर्थलाई लिएर लड्नुहुनेछ र वा, मेरो मतलब यो हो कि शाब्दिक अर्थमा त्यो के हो। र जब तिनीहरू भन्छन्, "वा," यो त्यहाँ त्यो डिसजन्याक्टिवमा रहेको हुनुपर्छ। र त्यसकारण यसलाई ठाडो रूपमा एकीकृत गरेर र त्यसपछि अतिरिक्त ing १०,००,०००, su २,100,000,००० मा राज्यको लागि मुद्दा चलाएर ताकि तपाईं इजाजतपत्रको लागि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यसले क्यानाबिस इजाजतपत्रको मूल्य राखेको छ, फ्लोरिडा राज्यमा मात्र होइन, तर जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनुपर्दछ वा हुन सक्दछ।
हो, हो, हो इजाजतपत्रहरू उच्च उच्च छन् र एकदम इमान्दारीसाथ, स्वास्थ्य विभागले यो मुद्दा चलाउन धेरै पैसा खर्च गरिरहेको छ र उनीहरूसँग यो गर्न संसाधन छैन। र वास्तवमै MMTC ले पछ्याउनुपर्ने वास्तविक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको बजेटबाट पनि टाढा छ। र त्यसैले वास्तवमा त्यहाँ हुनुपर्ने जति कार्यान्वयन छैन, केवल किनभने DOH वास्तवमै संसाधनहरू छैन।
यो गर्दैन। यो मेरो समझ हो कि फ्लोरिडामा केवल चार खेलाडीहरू छन्। के यो सत्य हो? जस्तै कति-
मूल फ्लोरिडा मारिजुआना इजाजत पत्र
त्यसोभए मूल इजाजतपत्र जस्तो थियो, मलाई लाग्छ कि उनीहरूले चार वा पाँच खेलाडीहरूलाई लाइसेन्स दिएका छन्। त्यसोभए ती केटाहरूले बजारमा ठूलो टाउको शुरू गरे। र त्यसपछि त्यसको लागी उनीहरूले इजाजतपत्र पाए, र अब हामी २२ लाइसेन्समा छौं। अहिले लगभग आठ वा नौ मात्र छन् जुन साँच्चिकै अपरेट हुन्छन्। ती आठ वा नौ मध्ये चार वा पाँच मध्ये उनीहरू वास्तवमै हावी छन्, किनकि उनीहरूसँग ठूलो हेडस्टार्ट थियो।
त्यसोभए त्यहाँ क्याप छैन, त्यसैले औषधालय र विधान, उनीहरूले भने कि तिनीहरू २ 25 औषधालयहरूमा क्याप भएका छन्। केवल तिनीहरू बढ्न सकेन, प्रक्रिया गर्न र प्रबन्ध गर्न सक्दछन्, र इलिनोइसमा विपरित जहाँ तिनीहरू ft००० वर्ग फिटमा तिनीहरूको शिल्प जम्मा आकारका लागि क्याप्ड छन्। फ्लोरिडा मा, तपाईं आफ्नो बढ मा समेटिएको छैन। तपाइँ तपाइँको प्रशोधनमा क्याप हुनुहुन्न। र वितरणको लागि, तपाईं २ locations स्थानहरूमा सीमित हुनुहुन्छ। तर जब तपाईं माथि पुग्नुहुन्छ ... हामी प्राप्त गर्ने क्रममा ... हरेक १००,००० बिरामीहरू, तपाईं अर्को पाँच औषधालयहरू पाउनुहुनेछ। अहिले हामी 5,000००,००० भन्दा बढी बिरामीमा छौं। त्यसो भए यी प्रत्येक ठाडो रूपमा एकीकृत निकायहरुमा २ 25 भन्दा बढी मूल रूपमा bas० वटा औषधालयहरू हुन सक्छन्।
र त्यहाँ केही मुद्दा पनि थिए जुन वास्तवमा ती लाईसेन्सहरूलाई अझ बढी डिस्पेंसरीहरू पनि खोल्न अनुमति दिन्थ्यो। त्यसोभए किन उनीहरूले सुपर इजाजतपत्र बुझाउछन्। र यसले स्पष्ट रूपमा ठूलो पैसा खर्च गर्दछ मात्र बढ्दैन, मात्र प्रक्रिया मात्र होइन, यी सबै वितरण स्थानहरू खोल्न को लागी प्रयास गर्न पनि।
यस्तो देखिन्छ कि फ्लोरिडा राज्यले चार व्यक्तिलाई फाइदा दियो। चार-
यो चार व्यक्ति थिएन, यो चार फ्लोरिडा मानिस थिए। र त्यसपछि त्यो चार व्यक्ति थिएन। यो त्यस्तो छैन जस्तो चारजना मान्छेहरू बसिरहेका थिए, प्रत्येक २० करोडमा बसिरहेका थिए र ती सबै भित्र भइरहेका छन्। यी संगठनहरू हुनुपर्दछ जुन सँगै आएका थिए र धेरै पूँजी र सडकमा धेरै प्रतिभा राखेका थिए, किनभने अन्यथा तपाईं ' पुनः कि छिटो बढ्नको लागि सक्षम हुन जाँदै हुनुहुन्छ।
ठिक छ, मेरो मतलब यो छ कि यसलाई सच्याउन पनि यो फ्लोरिडाका पुरुषहरू पनि होइनन्। र यही कारणले फ्लोरिडाका धेरै मानिसहरू धेरै चिन्तित छन् कि फ्लोरिडाका किसानहरूलाई यहाँ लाइसेन्स जारी गरिएको थियो र त्यहाँ requirements० बर्षदेखि नर्सरी चलाउँदै आएका केही आवश्यकताहरू थिए। तर सहि जब तिनीहरूले त्यो इजाजतपत्र पायो भने उनीहरू ठूला एमएसओमा बेचिन्थ्यो। अहिले अहिल्यै फ्लोरिडा, संचालनमा रहेका धेरै इजाजतपत्रहरू धेरै, धेरै ठूला एमएसओको स्वामित्वमा छन् जुनसँग केही गर्नुपर्दैन। तिनीहरू फ्लोरिडाका पुरुषहरू होइनन्, तिनीहरू फ्लोरिडाका मानिसहरू होइनन्। तिनीहरू फ्लोरिडा कम्पनीहरू पनि होइनन्। तिनीहरू केवल विशाल उद्यमहरू हुन्। तर तपाइँलाई थाहा छ, किसानको बचावमा, धेरै मानिसहरूले यी किसानहरूलाई यी लाइसेन्सहरू बेच्नलाई धेरै ढिलो दिन्छन्। तर वास्तविकता के हो भने, बैंकि with जति चुनौतीको साथ उभिरहेको छ र यो ठाडो रूपमा एकीकृत भएको छ र परिचालन हुन यति महँगो छ, यी किसानहरू, तिनीहरूमध्ये कोही धनी किसानहरू हुन सक्दछन, उनीहरूको एक लाख वा २० लाख हुन सक्छ, तिनीहरू डोन गर्छन्। २० करोड छैन।
त्यसोभए उनीहरूसँग वास्तवमै कुनै विकल्प छैन। तिनीहरू getण लिन बैंकमा जान सक्दैनन्। उनीहरूसँग वास्तवमै इक्विटीका लागि बेच्नुबाहेक अरू विकल्प छैन। र तिनीहरूले त्यसो गरे। त्यसोभए, मलाई लाग्दैन कि यो जरूरी किसानको गल्ती हो। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण प्रणाली अलि त्रुटिपूर्ण थियो। तर तपाइँलाई के थाहा छ, दिनको अन्त्यमा यो नयाँ प्रणाली हो र मलाई लाग्छ फ्लोरिडाले वास्तवमै राम्रो राम्रो काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ ठाडो एकीकरणले बिभिन्न मुद्दाहरूको धेरै मद्दत गर्‍यो। तर मलाई लाग्छ हामी एक त्यस्तो बिन्दुमा छौं जहाँ हामीले निश्चित रूपमा तेर्सोमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।
ठिक छ, के तपाईलाई लाग्छ ... मेरो मतलब हो, किनकि यदि ती क्षैतिज परिवर्तन भएन वा तपाईलाई केटाले थप अवसर दिदैनन् भने ती चार व्यक्तिले केवल राम्रो उत्पादकहरूले यसलाई राम्रोसँग हेर्ने छन् र तिनीहरूलाई खरीद गर्नुहोस्। मेरो मतलब, अनिवार्य रूपमा तिनीहरू हुनेछन्, यदि त्यहाँ टोपी छैन, किनभने यहाँ वाशिंगटनमा हामीसंग छ-
त्यसोभए मूलतः तपाईं के भनिरहनु भएको छ, इलिनोइसमा विपरित जहाँ हामीसँग लाइसेन्स होल्डिंगको बारेमा यी क्यापहरू छन् त्यसैले कोहीले पनि उद्योगमा प्रभुत्व जमाउन सक्दैनन्। फ्लोरिडा मा यो देखिन्छ, र यो वाशिंगटन जस्तो लाग्छ तपाईंसँग बिल्कुल ठीक समस्या छ जहाँ तपाईंसँग केहि ठूला खेलाडीहरू छन् जुन के भइरहेको छ बहुसंख्यक के भइरहेको छ। र त्यसो भए यो खेलमा प्रवेश गर्न असम्भव छ।
हो र केवल स्पष्ट गर्नका लागि, फ्लोरिडामा कुनै पनि एकाइको इजाजतपत्रमा%% भन्दा बढी ब्याज हुन सक्दैन। त्यसो भए यो तपाईको जस्तो छैन ... फ्लोरिडामा एउटा इकाईले अर्को लाइसेन्स किन्न सक्छ। तर हो, मेरो मतलब त्यहाँ वास्तवमा क्याप छैन।
होइन, इजाजतपत्रहरू छुट्टै हुनु पर्छ। त्यसोभए त्यहाँ कुनै लाइसेन्स अन्तर्गत मर्ज गर्न त्यहाँ कुनै कारण छैन। मेरो मतलब यो छ कि लाइसेन्सको मूल्य $ 50 मिलियन छ। त्यसोभए किन तपाईं तिनीहरूलाई एक लाइसेन्समा मर्ज गर्नुहुन्छ जब तपाईंसँग यति मूल्य हुन्छ? त्यसोभए, मेरो मतलब तपाईले मेडमेन जस्तै केहि देख्नुहुनेछ, उनीहरूले यहाँ तल एउटा ठूलो छाना बनाए। मलाई थाहा छ उनीहरूको औषधालयहरूका लागि उनीहरूको ठूला योजनाहरू थिए र तिनीहरूले ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू राखेका थिए। र वास्तवमै तिनीहरू मध्ये धेरै, मेडमेन र सुर्टराले मनोरञ्जनका लागि तल निवेदनलाई फाइनेन्स गरिरहेका थिए, र उनीहरूले ठूलो पूंजी राखे, र स्पष्टतः उनीहरू मनोरन्जनका लागि बजार गर्दै थिए-
२०२० को लागि फ्लोरिडा मनोरन्जन कानूनीकरणको साथ के हुँदैछ?
पक्कै। त्यसैले त्यहाँ दुई समूह फ्लोरिडा नियमन थियो र त्यसपछि त्यहाँ मिल्फ़ याचिका थियो। त्यसैले फ्लोरिडालाई नियमित गर्नुहोस् वास्तवमै धेरै चाँडो शुरू भयो। तिनीहरूको समस्या यो हो कि तिनीहरूले २२ लाइसेन्सहरूको समर्थन प्राप्त गरिरहेका थिएनन, त्यसैले उनीहरूसँग हस्ताक्षरहरू प्राप्त गर्न वास्तवमा कोष थिएन। यहाँ फ्लोरिडामा मतपत्रमा ल्याउन तपाईलाई ,22००,००० भन्दा बढी हस्ताक्षरहरु चाहिन्छ। र तिनीहरू एक सय हजार भन्दा थोरैमा उठे, यो सर्वोच्च अदालतको समीक्षामा पुगे, जुन यो कुरा राम्रो थियो कि उनीहरूले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्षम थिए। तर त्यसबेला मिल्फ बोर्डमा आए र उनीहरूलाई मेडेमेन र सुर्टेराले लगानी गरेका थिए र धेरै व्यक्तिहरू त्यो निवेदनमा केही भाषाको साथ नाराज थिए। म दु: खी थिएँ किनकि म केवल सबैले सँगै मिलेर काम गरेको चाहान्छु। यो धेरै निराश छ कि हामी एक अर्कासँग लडाई गरिरहेका छौं यदि हामी सबै भेला भएको भए।
त्यसोभए अब तपाईसँग रेग्युलेट फ्लोरिडा छ कि १०,००,००० हस्ताक्षरहरू छन्। तपाईले मिल्डेस पाउनुभयो जुन दुई सय हजार हस्ताक्षरहरू छन्। समय टिकिरहेको थियो, मूलतः उनीहरूसँग फेब्रुअरी भित्रमा निश्चित रकम हुनुपर्‍यो, उनीहरूले यसलाई ठक्कर दिइरहेका थिएनन्। त्यसोभए उनीहरू मूलतः झुके। त्यसोभए यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, उनीहरूसँग भेला हुने अवसर थियो र मलाई लाग्छ यदि तिनीहरू सँगै आएका भए हामीले यसलाई कानुनी रूपमा देख्न सक्ने थियौं। सबैभन्दा ठूलो मुद्दा घर बढ्नु हो। मलाई थाहा छ तपाईंले भर्खरै शोको सुरूमा उल्लेख गर्नुभयो जुन तपाईं होमग्राउनमा लड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मिल्फ़ याचिकामा फ्लोरिडालाई नियमन गर्न घर बढ्नका बारे केही थिएन।
अब तपाईं यो मिल्फ़ याचिका भन्नुहुन्छ, के तपाईंले मिल्फ़ याचिका अनप्याक गर्नुभयो? किनभने म सुन्दरी सुन्दै छु र म जस्तो छु, "मलाई लाग्छ कि यसले अझ बढी हस्ताक्षर हुनुपर्दछ, विशेष गरी फ्लोरिडामा।" यसको अर्थ के हो?
MLF मारिजुआना कानूनीकरण फ्लोरिडा
तपाईंलाई थाहा छ, म यसलाई मिल्फ़ याचिका भन्छु। यो राम्रो प्रश्न हो।
यो फ्लोरिडा मा मारिजुआना वैधानिकता हो। [क्रस्टलक ० 00:15:50०] तर वास्तवमा तपाईंले मिल्फे भनेका थियौं कि त्यो उनीहरूको भाँडा बनाउने हुन्थ्यो, उनीहरूले त्यो पनी पछि मार्केट गर्नुपर्‍यो, किनकि [क्रसटल्क ०:00:15:59] -
र तपाईंले पाउनुभयो, तपाईंले यसलाई संकेत गर्नुभयो। हो, तर यो एक प्रकारको मुद्दा हो जहाँ तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, "ठीक छ, त्यसो भए तपाईसँग यी दुई प्रतिस्पर्धी छन् [सुन्न नसक्ने 00:16:08] पहलहरू छन् र त्यसपछि तपाईले आफ्नो काम दुई गुणा कठिन बनाउनु भएको छ। र फेरि, घर बढेको चिकित्सा बिरामीहरूको लागि प्रदान गरिदै जान्छ र ती मध्ये कुनै पनि हो? वा घर बढेको मुद्दा के हो जुन एकबाट अर्को छुट्टियो?
त्यसोभए वास्तवमै रेग्युलेट फ्लोरिडा दैनिक व्यक्तिको तल्लो तहको आन्दोलन हो जुन वास्तवमै मारिजुआना कानुनीकरण चाहन्छ। मिल्फे आन्दोलनलाई वास्तवमै मेडमेन र सुर्टेर्राले समर्थन गरेका थिए र यो उनीहरूको फाइदाको लागि हो कि घर बढ्न सम्बन्धित कुनै पनि कुरा समावेश नगरे। अवश्य पनि उनीहरू तर्क गर्छन् कि उनीहरू घर बढ्दै जाने सन्दर्भमा मौन थिए र तिनीहरूले यसलाई विधायिकामा छोड्दैछन् र उनीहरूसँग घर छोड्नुपर्ने उनीहरूका कारणहरू छन्। उनीहरूले भने कि यसले संवैधानिक संशोधन जटिल बनाउँछ र संवैधानिक संशोधन प्राप्त गर्न तपाईं यसलाई सरल राख्न चाहानुहुन्छ र उनीहरूले यसलाई राख्न चाहन्थे, जसरी मिल्फ़ याचिका एकदमै छोटो थियो। नियाम फ्लोरिडा याचिका एकदम लामो थियो यसमा विस्तृत मात्राको विस्तृत जानकारीको साथ, त्यसैले-
मैले फ्लोरिडा र वाशिंगटन राज्यलाई पनि मन परेको प्रश्न थियो र [सुन्न सकिने 00:17:11] यो होइन। मलाई लाग्छ यो दुई भाग प्रश्न हो। पहिले, फ्लोरिडाको विधायिकाले वास्तवमा उनीहरूको कार्य पाउन सक्दछ र एकसाथ एक विधान ल्याउन सक्छ? किनभने जब तपाई मतपत्र पहलको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो दोस्रो भाग हुनेछ। तपाईले त्यसमा संविधान संशोधन गर्नु पर्ने कुरा राख्नुभयो र यो प्राय: छोटो हुन्छ। कसले यसलाई व्याख्या गर्छ, र नियमहरू बनाउँदछ ताकि यो वास्तवमै विधायी रुब्रिक हुन सक्छ हामीसँग वा भांगको साथ उद्योगको रूपमा चाहिन्छ?
हो अहिले हामीसँग वास्तवमा सिनेटका जेफ ब्रान्डिसले सेनेट बिल १ 1860० राखेका छन जुन वयस्कको प्रयोगको लागि हो, वास्तवमा अन्तिम विधायकीय सत्र सदन प्रतिनिधि माइकल ग्रिकोको, उनले वास्तवमै मनोरन्जनको बिल पनि राखेका थिए। उसलाई थाहा थियो यो हैन, म माइकलको साथ साथी हुँ, उसले मलाई भन्यो कि यसले वास्तवमै शट गर्दैन। तर उनी सन्देश पठाउन चाहन्थे, "हे, यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी गत वर्ष छलफलको एक हिस्साका रूपमा लिन चाहन्छौं।" यस वर्ष जेफ ब्रान्ड्सले यो बिल १1860० भर्यो। यो राम्रो बिल हो। म यसलाई समर्थन गर्दछु। योसँग, मलाई थाहा छ हामी इलिनोइस विधानको सामाजिक इक्विटी कम्पोनेन्टको बारेमा धेरै कुरा गर्थ्यौं। योसँग एक कम्पोनेन्ट छ, यसले आपराधिक सामानहरूको विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले केही हदसम्म त्यहाँ केहि सामाजिक इक्विटी कम्पोनेन्ट छ-
तर यसले भोजलाई पक्राऊ वा केहि पनि राख्न आवेदकहरूलाई कुनै पोइन्ट दिदैन।
ठ्याक्कै, हो। मेरो मतलब इलिनोइसमा, जसरी तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले २०% पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि तपाईं कसैसँग स्वामित्व र ईकाईको नियन्त्रणको साथ आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने। र त्यसैले त्यो बिन्दुहरूको एक विशाल रकम हो। त्यसो हो भने जो कोही पनि सामाजिक इक्विटीको साथ आवेदन गरिरहेको छैन धेरै राम्रो छ, उनीहरूसँग कुनै मौका छैन। त्यसो भए उनीहरूले केहि पोइन्ट्स विनियोजन गरेनन्। अवश्य-
तपाइँ खेल्न बाध्य हुनुहुन्छ, यो एक प्रतिस्पर्धी लाइसेन्स संरचना हो।
हो, र वास्तविकता के भने यो हो कि हाम्रो कन्जर्भेटिभ विधायिकाको साथ अहिले यो एक सम्भावित सम्भावना छ कि यो विधायिकाबाट भएर जान सक्छ। यो वास्तवमै संवैधानिक संशोधनमार्फत बढी हुन्छ। तर तपाइँलाई थाहा छ, यस उद्योगमा, तपाइँलाई कहिले थाहा हुँदैन। त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ, म आशावादी छु। म स्पष्ट रूपमा यस बिलमा आन्दोलनको ट्र्याक गर्दैछु। तिनीहरू अहिले सत्रमा छन् र तिनीहरू भेट्दै छन् र उनीहरूले यस बारेमा कुरा गरिरहेका छन्।
यो सायद वर्तमानमा जुन फारममा समाप्त हुँदैन। यो सम्भवत धेरै फरक संशोधनहरूको हदसम्म जान्छ जुन यसलाई बाहिर निकाल्छ र अनुमोदित हुन्छ। तर यो ठूलो अवसर हो। र यसको बारेमा साँच्चिकै चाखलाग्दो कुरा के यो पनि हो, फ्लोरिडामा ठूलो कुरा ठाडो एकीकरण हो। तिनीहरूलाई केहि पनि सम्झौताको लागि अनुमति छैन। त्यसोभए बढ्दो देखि प्रोसेसिंग, वितरण गर्न, तिनीहरू वास्तवमै यी कुनै पनि सेवाहरू सम्झौता गर्न सक्दैनन्।
सिनेट बिल १ 1860० ले उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा अनुबन्धित गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ सेवा प्रदायकहरू हुन सक्छन् जुन आयो र यी लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ। त्यसकारण धेरै व्यक्तिहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि उनीहरूले यातायात गर्न चाहेको हदसम्म कम्पनीहरूका लागि पप्प अप गर्ने अवसरहरू हुन गइरहेका छन् जुन गाँजाको यातायातमा विशेषज्ञ छन् र जुन हाल फ्लोरिडामा अहिले उपलब्ध छैन।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो कि तपाईं एक कन्जर्भेटिभ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, र जब म फ्लोरिडा सोच्छु, म बुढो मान्छेहरू र रूढीवादीहरु र त्यहाँ भएको सबै पैसा सम्झन्छु। म जर्सीमा बस्ने गर्थें, त्यसैले म जनसंख्याको मानसिकता र कुन कुराबाट परिचित छु। के तपाइँ एक निवासीको रूपमा सोच्नुहुन्छ र के हुनहुन्छ जो तपाइँको राजनीति हेर्छ, त्यहाँ बिग फार्माबाट धेरै पुशब्याक छ? मेरो मतलब, कसरी थप व्यक्तिहरू तपाईंको पुरानो भोटिंग जनसंख्यामा पुग्न सकेका छैनन् किनभने त्यो रूढिवादी व्यक्ति, मेरो मतलब, हामी गाँजालाई वर्जित बनाउन गर्दछौं। यो हैन, यो मलहम जस्तै छ। यो रक्सीभन्दा राम्रो हो। यो अन्ततः जस्तो छ जब हामी कानुनीकरणमा पुग्छौं जुन हामी सबै चाहन्छौं, यो हुन्छ, तपाई यसलाई ब्रोकली जस्तै किन्न सक्नुहुन्छ, हैन? C० सेन्टको लागि पाउण्ड जस्तो, किनभने आम मानिसहरू बढ्दै छन्।
कम्तिमा भोडकामा लाइन कोरौं, जस्तै [सुन्न नसकिने 00:21:09] कार्डहरू। यो एक उद्योग हुन गइरहेको छ जुन फेरि महँगो पनि छ। तर तपाईं यस मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
ठीक छ, हेर्नुहोस् यदि तपाईं एक संघीय स्तर मा हेर्नुभयो भने, तपाईं देख्नुहुनेछ कि दुबै दलहरू यस मुद्दामा सँगै आउन थालेका छन्। र मलाई लाग्छ कि तपाईंले फ्लोरिडामा त्यो हेर्न सुरू गरिरहनु भएको छ, र तपाई त्यसलाई विभिन्न राज्यहरूमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट सोच्दछु, स्पष्टतः यो रूढीवादी हो जुन… र हेर, मसंग रूढिवादीहरुसंग केही छैन। म वास्तवमै म रूढिवादी हुँ, म यी मुद्दामा मतदान गर्छु। तर यो विशेष मुद्दा मा, तिनीहरू धेरै थकित छन्, तर ती मध्ये धेरै परिवर्तन भयो। मैले धेरै कन्जर्वेटिभ विधायकहरूसँग कुरा गरेको छु जुन बदलेको छ र तिनीहरू विश्वासीहरू हुन्। उनीहरूले फ्लोरिडामा रहेका केही पुरानो डेमोग्राफिकसँग कुरा गरेका छन्। उनीहरूले औषधीय फाइदाहरू बुझेका छन्। मसँग काम गर्ने केही डाक्टरहरूले वास्तवमै हाम्रो राज्यको क्यापिटलमा ताल्लाहासीमा उनीहरूको आवाज सुने।
के तपाईलाइ यो सन्देश लाग्छ ... माफ गर्नुहोस्, तपाईलाई के लाग्छ कुनलाई फ्लोरिडाका मानिससँग गाँजा कानून सम्बन्धी अधिक अनुनाद हुन्छ? यो कसरी राम्रो छ भन्ने बारे मा सन्देश, प्रभावी औषधि, वा सन्देश यो राम्रो व्यवसाय हो। किनभने जब म फ्लोरिडा सोच्छु, म रूढिवादी ठान्छु, तर मलाई लाग्छ, "हो, तर तिनीहरू व्यवसाय रूढीवादी हुन्। तिनीहरू के गरिरहेछन् भन्ने बारे उनीहरूको ख्याल राख्छ। उनीहरू आफ्नो नम्बरहरूको ख्याल राख्छन्। "
ठिकै भए पनि तपाईले जे सन्देश पठाउन खोज्नु भएको छ हेर, कानूनको स्कूलमा तपाईलाई सँधै सिकाईएको हुन्छ तपाईको श्रोता को हो भनेर चिन्न सकिन्छ। र त्यो एउटा कुरा हो म धेरै… मँ सधैँ जान्दछु मेरो दर्शक को हो। यदि तपाई सिम्पलटनको बिरूद्ध कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ एक शिक्षित व्यक्ति, कोही जसले वित्त बुझ्दछ, कोही मानिस जसलाई वित्त बुझ्दैन। तपाई कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु भयो। र हो, चीजहरू जुन रूढीवादीहरूसँग प्रतिध्वनित हुन्छन् कि त्यो पैसा कमाउने कुरा हो। यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। धेरै कर डलर हामीले पाइरहेका हुन्छौं, पाठ्यक्रममा हामी गल्तीहरू गर्न चाहँदैनौं क्यालिफोर्नियाले बनायो र यी अन्य राज्यहरूले यसलाई कडा गरेर कर।
तर त्यहाँ धेरै व्यापारिक अवसरहरू छन् भन्ने मलाई लाग्दछ जुन रूढिवादी समूहसँग अलिकति प्रतिध्वनि हुन्छ। तर अशक्तताको बारेमा कुरा गर्न सँधै महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँ अर्को चुनौती भनेको नगरपालिकाको एक धेरै हो जुन औषतलयलाई वास्तवमै प्रतिबन्ध गर्दछ जुन हाम्रो राज्यको कानूनमा अनुमति छ। त्यसैले मैले स्थानीय स्तरमा पनि धेरै काम गरें, केहि स्थानीय अधिकारीहरूलाई उनीहरूले किन प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भनेर सिकाउँदै। र स्पष्टतः यसको एक धेरै कलंकमा आधारित छ। यो केवल जनतालाई शिक्षित गर्दैछ र
मारिजुआना र NIMBY प्रभाव, मेरो पछाडिको प्रभावमा होईन।
तर अब हामी अहिले जनतालाई शिक्षित गरौं र म जनता हुँ, किनकि म इलिनोइबाट हुँ जहाँ हामीलाई हाम्रो संविधान संशोधन गर्नका लागि मतपत्र पहल गर्न अनुमति छैन। तपाईं त्यो सानो, सानो सानो संशोधन कसरी लिनुहुन्छ जुन उनीहरूले त्यहाँ राखेका थिए र प्रशासनिक नियमहरू सहित पूर्ण विधायी ट्रेन फेब्रिक सिर्जना गर्नुहोस् ताकि तपाईं क्यानाबिस उद्योगलाई इजाजत दिन र नियमन गर्न सक्नुहुनेछ? वा फ्लोरिडामा मारिजुआना उद्योग?
यो सबै याचिकाबाट सुरू हुन्छ, त्यसैले तपाईंले याचिकाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्‍यो, र मैले भनें, रेगुलेट फ्लोरिडा याचिका निकै लामो थियो। र वास्तवमा एकचोटि तपाईं यो पार गर्नुभयो भने, मलाई लाग्छ कि तपाईंलाई ,90,000 ०,००० हस्ताक्षरहरू चाहिन्छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि वित्तीय समीक्षा गर्दछ र उनीहरूले भाषा समीक्षा गर्दछन्, र संवैधानिक संशोधनको भाषा स्पष्ट रूपमा सुस्पष्ट हुनु आवश्यक छ र यो वास्तवमा एउटा बिषयलाई समेट्नु आवश्यक छ। तपाईले बहु शीर्षकहरू कभर गर्नु पर्दैन। त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ, एकपटक तपाई सर्वोच्च अदालतको समीक्षाको पछि जानु भएपछि तपाईले हस्ताक्षरहरु मतपत्रमा प्राप्त गर्नुभयो, तपाईले 766,000 XNUMX,००० हस्ताक्षर वा त्यस्तै केहि पाउनु पर्छ।
त्यसपछि यो मतपत्रमा जान्छ, तपाईंले यसको लागि मतदान गर्नुभयो। त्यसोभए विधायिकाहरू भित्र पसे र उनीहरूले [श्रव्य सुन्न सकिने ० 00:24::45:XNUMX] कानून पायो जुन त्यो संविधानसँग मिल्दोजुल्दो छ। र फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्टको केस यही हो जहाँ त्यो विधायक आइपुगेको थियो। र स्पष्टतः फ्लोरिडा संविधान फ्लोरिडा विधान भन्दा उच्च छ। र जब फ्लोरिडा कानुन र फ्लोरिडा संविधान बीचको विवाद छ, त्यहाँ एक विवाद छ र त्यो विधान असंवैधानिक मानिनेछ। र त्यो हामी अहिले स्थितिमा छौं।
यो गर्छ, र यो लामो समय भयो जबदेखि म पूर्वी तटमा छु। के वसन्त ब्रेक अझै पनि त्यहाँ मानिस मा एक कुरा हो? जस्तै डेटोना र ती सबै चीजहरू अझै पनी चीज छन्?
पक्कै। म फोर्ट लाउडरडेल समुद्री किनारमा बस्छु त्यसैले हो, मार्च समय आउनुहोस्, यहाँ पागल छ। म समुद्र तटबाट त्यस समयमा टाढा रहन कोशिश गर्दैछु।
त्यसोभए, यस क्षणमा यहाँ हुनु पर्छ तर्क, ठीक छ? किनकि मँ सम्झन्छु, र मेरो मतलब जंगली बकवास हुन्छ।
जंगली छाला। र यो जिमी बुफेको स्वामेको सनटेरा वा सुर्टेर्रा द्वारा ईन्धनको रूपमा रहेको छ, त्यो कम्पनीहरु मध्ये एक हो ... बुफेले फ्लोरिडा भांग बजारमा केही कार्य गरेको छ।
हो, सुर्टेर्राको संलग्न छ, र म तपाईंलाई बताउँछु, समुद्रतटको साथ, डियरफिल्ड मध्ये एक, मैले डियरफिल्ड सुनुवाईमा बोले जब उनीहरू मारिजुआना औषधालयलाई प्रतिबन्धित गर्न खोजिरहेका थिए र मेडमले समुद्री किनारमा स्थान खरीद गर्दा उनीहरूको ध्यान वास्तवमै कस्तो भयो। । र मेडमेन, तिनीहरू मनोरन्जनात्मक हुन्, उनीहरूको ध्यान, जब तपाईं उनीहरूलाई बजारबाट हेर्नुहुन्छ-
हो, तिनीहरू मनोरञ्जनात्मक घर जग्गा भांग हो, र तिनीहरू सोच्दै थिए, "ओह, अबदेखि years बर्ष पछि हामी सबैको विभाजन हुनेछ, हामी रेगे सुन्दै छौं, यो सुन्दर हुनेछ।
समुद्र तटमा, डियरफिल्ड बिचमा चिलिंग। र त्यसले डियरफिल्ड व्यक्तिहरूको बकवासलाई डरायो। र तिनीहरू वास्तवमा तथ्य पछि एक प्रतिबन्ध गरेर समाप्त भयो। त्यसोभए मेडमेनले उनीहरूको स्थान पाए, तर उनीहरूले वास्तवमा यसलाई प्रतिबन्ध लगायो। र मलाई लाग्छ कि त्यो निर्णय उनीहरूको फ्लोरिडा विधान अन्तर्गत गर्न अनुमति दिईएको विपरित थियो। फ्लोरिडा विधानले उनीहरूलाई राख्न अनुमति दिदैन ... यदि तिनीहरूले मारिजुआना औषधालयहरू अनुमति दिए भने उनीहरूले क्याप राख्न सक्दैनन्। र म के विश्वास गर्दछु यदि तपाईं त्यो सुनुवाईको मिनेटहरू डियरफील्ड सत्रमा पढ्नुहुन्छ भने, र यो सबै बिभिन्न नगरपालिकाहरूमा देखा पर्दछ, वास्तवमा औषधालयहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि तिनीहरूको आधार उनीहरूलाई लाग्यो कि उनीहरूसँग पहिले नै पर्याप्त छ।
त्यसो हो भने यदि कानूनले तपाईलाई डिस्पेन्सरीजहरूको स on्ख्यामा अगाडिको छेउमा क्याप राख्दैन भने, तपाईलाई किन केही औषधालयहरू अनुमति दिइन्छ र भन्नुहोस्, "ठीक छ, हामीसँग पर्याप्त छ, अब हामी यसलाई प्रतिबन्धित गर्न गइरहेका छौं। " यो मूलत: यो फारममा पदार्थ हो। स्पष्ट रूपमा तिनीहरू समान काम गरिरहेका छन्। त्यसोभए यदि एउटा MMTC ले त्यो प्रतिबन्धको साथ लड्न चाहन्छ, मलाई लाग्छ कि उनीहरूसँग राम्रो केस छ।
फ्लोरिडामा सबै स्थानहरूको लागि यो केवल पागल देखिन्छ कि यी एसिनाई राजनीतिज्ञहरूले समुद्री किनारमा गाँजा रोकिरहेका छन्। मलाई नराम्रो घटनाहरू याद छ जुन फ्लोरिडा वा एटलान्टा वा सबै नराम्रा चीजहरूमा भयो, कम्तिमा वसन्त ब्रेक अवसरहरूमा चाडपर्वहरूमा रक्सीलाई ईन्धन दिइन्थ्यो। के तपाईंले आफ्नो कमबख्त शहरमा रक्सीको साथमा धेरै नराम्रा चीजहरू हुनुपर्‍यो, तपाईंले भन्नुभन्दा पहिले, "ठीक छ, हामी कमिलाहरूलाई एक मौका दिऔं।"
जब नयाँ वर्षमा फिशले बिग साइप्रस बज्यो, र मेरो मतलब यो होइन, "हे भगवान, त्यहाँ फिश कन्सर्ट छ जुन समुद्र तटमा सात घण्टा चलिरहन्छ, फ्लोरिडामा पोटहेडहरू जाने बाटो हो।" होइन, मेरो मतलब हो, तर त्यो कलंक वास्तविक मान्छे हो। र त्यो कलंक व्यापक छ। र त्यसो भए यदि त्यहाँ मानिसहरूलाई निवृत्त हुन जान्छ भने, यो उमेरसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसोभए मेरो मतलब त्यो हुन सक्छ-
तर मेरो मतलब, तपाईले यो देख्नु भयो।
र त्यसपछि आफ्नो चाँदी टूना टुर संग, ऊ वास्तवमा त्यहाँ गाउँहरूमा जान र त्यो कलंक तोड्न कोशिस गर्दै छ, तर-
तर तपाईं वास्तविक-
र त्यो पनि कलंक लाग्छ। म विषयबाट टाढा नजाउन सुरू गर्दैछु, तर म psilocybin मशरूम आन्दोलनमा धेरै संलग्न हुन थालेको छु र मैले गत हप्ता मेरो नाफाको लागि नाफा नकलीकन शुरू गरें। हामी फेब्रुअरीमा हाम्रो वेबसाइटको साथ आउँदैछौं, तर हाम्रो नाफाको लागि फ्लोरिडामा साइलोसिबिन मशरूमहरूको जिम्मेवार कानुनी सुधार गर्न ड्राइभ र आध्यात्मिक अनुसन्धानको उपयोग गर्नमा केन्द्रित छ। र हामीले यसमा पहिले नै महत्त्वपूर्ण कोठा बनाइसकेका छौं। तर फेरि चुनौती भनेको कलंक हो।
यो भांगमा उहि चीज हो, तपाइँले यो कलंकलाई जित्न सक्नुभयो र तपाई आफैले भन्नुभएको थियो, रक्सी, तपाईसँग त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् जुन धेरै पिउँछन् र मदिराबाट मरेका हुन्छन्।
[सुन्न नसकिने 00:28:52] हजार यस बर्ष।
... कसैको भांग धूम्रपानबाट मर्ने छैन र कसैको पनि साइलोसीबिन च्याउ लिनको लागि मर्दैन। अब तिनीहरूले केहि नराम्रो निर्णय लिन सक्दछन् र मलाई लाग्छ त्यसैले म भन्दछु कि हामीलाई उत्तरदायी कानुनी सुधार आवश्यक छ। अधिक व्यक्तिहरूले यसलाई एक निश्चित सेटिंग अन्तर्गत लिइरहेका छन्। त्यसोभए मानिसहरू कार र धेरैको अगाडि हिडेका छन्।
Psilocybin मशरूम र मारिजुआना को वैधानिकता
ठीक छ, तर किनभने यो एक भ्रम जिन हो, तर यसको चिकित्सा गुणहरू देखिन्छ। यद्यपि, र यसमा ममाथि कुनै अधिकार छैन, र हामीले आफ्नो ध्यान फ्लोरिडा मारिजुआना कानुनतिर फर्काउनु अघि, संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नियन्त्रणित पदार्थ ऐन अन्तर्गत सायलोसिबिन भनेको के हो?
साइलोसीबिनको हाम्रो संस्कृतिमा लामो इतिहास रहेको छ। र चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यो फर्कियो, तपाईं आदिवासीहरूलाई हेर्नुहोस, सबै ठूला जनजातिहरू अझै पनी गरिरहेका छन् र तीमध्ये केहीलाई अयाहुस्का बर्नर जस्ता सामानहरू लिन आउँदछन् किनभने आध्यात्मिक कारणहरू र त्यस्तै सामानहरू। तर अनुसन्धान गरिएको छ। र वास्तवमै म कसरी भित्र पसे, जुन मलाई लाग्छ वास्तवमै चाखलाग्दो छ यो लगभग छ, मेरा सबै क्लाइन्टहरू होइन, तर मेरो भांगका ग्राहकहरू ठूलो मात्रामा साइलोसिबिन लिनमा धेरै इच्छुक थिए र उनीहरूले पूँजी स्थापना गर्न, पूँजी जुटाउन र सुरु गर्नमा चासो राखेका थिए। केहि सामानहरू गरिरहेको छ, चाहे यो जमैकामा होस्। डेन्भर भर्खरै यसलाई decriminalized। ओकल्यान्ड डिक्रीमिनेशन गरिएको, वास्तवमा शिकागो पनि डिक्रिमनाइजेसन गरिएको। भर्मन्टको बिल छ। ओरेगनको संवैधानिक याचिका भयो।
र त्यसैले म ती सोधपुछ गर्दै थिए। र त्यसोभए पूर्ण इमान्दारीपूर्वक म त्यो रुचि राख्दिन, किनकि मैले सोचे कि यो एक मजाक हो। मैले आफैँ साइकेडेलिक्स लिएको थिइन। त्यसैले मैले वास्तवमा मेरा केही डाक्टरहरूसँग कुरा गरें जुन मैले प्रतिनिधित्व गर्दछु र मैले to देखि १० डाक्टरहरूबारे कुरा गरें, र हातहरू तल ती सबैलाई औषधी मानमा ठूलो विश्वास थियो। त्यसो भए मैले आफ्नो अनुसन्धान गर्न थाले र जमैकामा केहि उत्पादकहरू र चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्न थालें। यहाँ साइट साइकाइट्रिस्टहरूसँग कुरा गर्दैछ जुन केटामाइन प्रयोग गर्दैछ, मेरो केहि दुखाई व्यवस्थापन डाक्टरहरू जसले केटामाइन प्रयोग गर्दैछन्। र मलाई अब भांगको तुलनामा साईलोसिबिन मशरूमको औषधीय मूल्यमा बढी विश्वास छ। तिनीहरू संग प्रमाण छ कि धेरै छ। र एफडीए पनि यसको पछाडि हुन सुरू गरिरहेको छ। त्यसोभए यो वास्तवमा एक एफडीए परिप्रेक्ष्यबाट हो जुन गाँजा भन्दा बढी स्वीकार्य छ।
तर तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ माइक्रो डोज जस्तै, शोराहरू जस्तै। म यहाँ एउटा केटालाई चिन्छु, उसले तिनीहरूलाई क्याप्सुलमा राख्दछ र मेरो मतलब, मलाई याद छ म बच्चाको रूपमा, कलेजको मान्छे हुँ, तपाईं एक जोडी लिन सक्नुहुन्छ, मैले यो रमाईलोको लागि गरे। यो राम्रो रात हुन गइरहेको जस्तो, किनकि मैले धेरै लिनुभयो। र यो औषधीको रूपमा फाइदाजनक छ। मेरो मतलब, तपाईं प्राकृतिक चिकित्सा कुरा गरिरहनु भएको छ। सबै कुराले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ, हैन? यहाँसम्म कि संख्यात्मक र यो सबै अन्य चीजहरू, यो सबै-
ठीक छ, एउटा कुरा जुन मलाई लाग्छ वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। जब म कसैको यात्राको बारेमा सायलोसिबिन च्याउमा छलफल गर्दछु, तिनीहरू सबै कविको रूपमा बोल्दछन् जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, उनीहरूले आफ्नो छालाको एक टुक्रा साझा गरे वा तिनीहरू सबैसँग यो एकता छ [सुन्न नसकिने 00:31:49]। यदि तपाईं तीन मुख्य चीजहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ जुन उनीहरू साइलोसिबिन च्याउको साथ उपचार गर्न खोज्दै छन् उदासीनता, PTSD र लत हो। र यदि तपाईं वास्तवमै यी तीनै चीजहरू के हुन् भनेर सोच्नुहुन्छ भने, दिमागमा केही यस्तो भइरहेको छ, त्यहाँ केही अवरोध छ। केहि छैन। र साइलोसिबिन मशरूमहरूले के गर्छन्, के यसले तपाईंलाई केवल बगाउन र आफ्नो दिमाग खोल्न र व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्न र वास्तवमा तपाईंको दिमागलाई रिसेट गर्न अनुमति दिन्छ। र त्यो तिनीहरू जमैकामा गरिरहेका छन्। त्यहाँ धेरै उपचार केन्द्रहरू छन् जुन तपाईं जानुहुन्छ र तपाईं सात दिनको retreats र यति धेरै गरेर र
मलाई थाहा छ कि मँ हाम्रो आवेदन सिजन पछि मार्च - मा समाप्त भएपछि के गर्दैछु।
तर तपाइँलाई थाहा छ, यो औषधि लिनको लागि स्वीकार्य छ कि कमबख्तले तपाइँलाई Xanax जस्तो लूप बनाउँदछ र एक गोलीलाई किन विरोध गर्दैन, मशरूमहरूको यस प्रकारको -
वा एउटा जसलाई एसएसआरआई भनिन्छ, त्यो राम्रो छ, तर मलाई लाग्छ फ्लोरिडा, इलिनोइस, सिएटलमा भांगको वैधानिकरण। र त्यसोभए यस्तो देखिन्छ कि डिरेगुलेसन वा साइलोसीबिनको नियमनमा भएको परिवर्तन केही हदसम्म यस अर्थमा सम्बन्धित छ कि हामीले २० औं शताब्दीमा यी औषधीहरू नियमन गर्न प्रयोग गर्ने विधिहरू केवल मूर्ख र गलत थिए। र यसले हामीलाई एक समाजको रूपमा चोट पुर्‍यायो किनभने यसले अधिक चिन्ताजनक प्रवण बनायो, थप लत प्रवण जीवन। र उनीहरूले वास्तवमै त्यसलाई बढावा दिन्छन्। मेरो मतलब, तपाईं s० को दशकमा सम्झनुहोस् जब तिनीहरूले फ्लिन्स्टन्सले टेलिभिजनमा सिगरेट पिउँथे, शाब्दिक रूपमा बच्चाहरूमा उनीहरूलाई मार्केटि। गर्थे। र अब यो तपाइँले एक कलंक संग लड्न छ कि शताब्दी द्वारा अगाडि बढ्न र जस्तै हुन को लागी बनाईएको थियो, "होइन, यस चिकित्सा अनुसन्धान हेर्नुहोस्। किन हामी यो गरिरहेका छैनौं? "
र के वास्तवमै रमाईलो छ, म देश भर वकीलहरू संग कुरा गर्दै छु जुन यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै छ। नूह पॉटर जस्ता मान्छे, जो 90 ० को दशकदेखि साइकेडेलिक कानून ब्लगमा थिए, मेरो मतलब यो मान्छे साइकेडेलिक्स र कानूनी फ्रेमवर्क र त्यस्तै सामानहरू सम्बन्धी जबरजस्त जानकारी ल्याउँछ। तर के मनमोहक हो कि एक जिम्मेवार के हो भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछ, र म वास्तवमै जिम्मेवार शब्द प्रयोग गर्छु, एक जिम्मेवार कानूनी ढांचा हुनेछ। यो भांग जस्तो नहुन सक्छ, र त्यहाँ धेरै विचारकर्मीहरूको साथ विचारको एउटा स्कूल छ जुन उनीहरू विश्वास गर्दैनन् कि यो मेडिकल फ्रेमवर्क हुनुपर्छ। किनकि जब तपाईं चिकित्सा फ्रेमवर्कको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, र मैले नूह पॉटरसँग यसको बारेमा लम्बाइमा कुरा गरेको छु र उहाँसँग यस विषयको बारेमा ठूलो ब्लग छ।
तर जब तपाईं चिकित्साको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, या त यो तपाईंसँग क्वालिफाइ। सर्त हो, त्यसैले तपाईं यसलाई मेडिकल रूपमा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। वा यदि तपाईंसँग एक योग्यता सर्त छैन, तपाईं एक अपराधी हुनुहुन्छ र आपराधिक रूपमा तपाईंलाई यो गर्न अनुमति छैन। र नूहले महसुस गर्ने तरीका र मैले अन्य वकिलहरूको कुरा गरेको छु कि साइलोसिबिन मशरूमहरूको लागि मेडिकल बाहिर धेरै मूल्य छ, उदाहरणका लागि आध्यात्मिक। र त्यसकारण मेरो नाफामुखी नाफाले जिम्मेवार कानुनी सुधार गर्नका लागि चिकित्सा र आध्यात्मिक अनुसन्धान प्रयोग गरिरहेको छ।
यसले मलाई भांगको आन्दोलनको बारेमा सदैव निराश तुल्यायो कि तिनीहरू सधैं किबोशलाई पहिलो संशोधन अधिकारमा राख्छन्। यदि कसैले भन्छन्, "होईन, म आध्यात्मिक कारणका लागि भांगमा विश्वास गर्दछु र म कसरी अभ्यास गर्ने भनेर मेरो धर्मको अभ्यास गर्ने मेरो अधिकार छ।" उनीहरू अझै भन्छन्, "नह।"
र दुबै भांग र च्याउमा, यो एक कल्याण मुद्दा छ। किनभने मेरो मतलब, व्यक्तिले यसलाई दुरुपयोग गर्छन् तर समान टोकनमा व्यक्तिहरूले यसले धेरै लिन सक्दछन् र तिनीहरूको जीवन यसको लागि उत्तम छ। हामीले अपराधीकरण गर्यौं, अमेरिकाले मैले प्रचारकको छोरी सिन्ड्रोमजस्तो सोच्न चाहेको जस्तै कष्ट भोगिरहेको छ, हैन? तपाईले उनी सबैलाई दबाउनुभएको छ र तपाईले उसलाई जीवनभर सानो कोठामा राख्नु भयो र अब, "ओहो, हामी सबै चुक्छौं किनकि मैले तिमीलाई कसरी सही गर्ने भनेर सिकाउन बिर्सनुभयो।" कफि एक औषधि हो, हाम्रो दैनिक जीवनमा क्याफिन-
के यो सामान्य रूपमा हुँदैन, र फेरि, किन म कहिल्यै पनि च्याउमा नपार्नुको कारण हो, किनकी मैले एक चोटि गरे र उनीहरूले मलाई shit र कुकुरहरू एकै समयमा दिए। सुरू गर्न भयानक तरीका। तर तपाइँलाई थाहा छ, ... हुन्छ। र यसैले, र त्यसपछि पनि, त्यसले मलाई अझै पनि ट्रिपिंग बलहरू भेट्टायो, त्यस स्तरको होइन, तर यो समय लगानी पनि हो। के मैले यसमा हेराएको छु, तिनीहरूसँग शमन जस्तो छैन जुन विशेषका लागि मार्गनिर्देशक मानिन्छ ...
र म तपाईंलाई भन्छु, त्यहाँ बाहिर मान्छेहरू यहाँ छन् मियामीले यो गरिरहेछन्। मैले उनीहरूसँग कुरा गरेको छु कि तिनीहरू यहाँ श्यामन्स हुन् कि ती आध्यात्मिक यात्राहरूमा मानिसहरूलाई डो .्याउँछन्। यहाँ तल समूहहरू पनि छन् जसले जमैकामा रिट्रीटहरू सेट अप गर्दछ जहाँ यो पूर्ण कानूनी छ। त्यसोभए यो के हो भने, उनीहरूले के कुरा गर्छन् भनेर तपाईंको सेट र तपाईंको सेटिंग हो। तपाईंले निश्चित हुनुपर्दछ जब तिनीहरूले सेट भन्छन्, तपाईंको सहि मनसाय यो भित्र पस्नेछ, र तपाईंसँग सही सेटिंग्स हुनुपर्दछ।
किनकि तपाईका भावनाहरू एक दिशा वा अर्को तानिन्छ। त्यसोभए यदि तपाईं भरोसायोग्य व्यक्तिहरूको वरिपरि डरलाग्दो वातावरणमा हुनुहुन्छ र तपाईंलाई मनपर्दैन भने, तपाईं डरलाग्दो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ। र यसको विपरित। यदि तपाईं एक सुन्दर सेटिंगमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं व्यक्तिहरू बीच हुनुहुन्छ जुन तपाईंले ख्याल राख्नुहुन्छ र तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ र कसले तपाईंलाई खोजिरहेका छन्। र शमनको काम भनेको यही हो जुन तपाईंलाई यात्रामा डोर्याउन सक्छ।
र म यो घृणा गर्दछु। यो मजाको कुरा हो जस्तो लाग्छ, दुई बर्ष पहिले म यस जस्तो कुरा गरिरहेको छैन। म पक्कै पनि हिप्पी वा त्यस्तो केहि छैन। तर तपाईंलाई थाहा छ-
मारिजुआनाको कलंक को प्राप्ति
होइन, यी केवल तथ्यहरू हुन्। इमान्दारीपूर्वक हिप्पीहरू [सुन्न नसकिने 00:36:48] पूरा समय हो।
तर यो सत्य होइन, किनभने अहिले तपाईले कलंकको अनुभव गरिरहनु भएको छ जुन हामी वास्तविक समयमा बाँचिरहेका छौं। किनकि मैले यो सोच दुई बर्ष अघि गरेको थिएन र मानिसहरूले त्यस्तो व्यक्त गरिरहेका छन्, "हेर, कलंक ममाथि थोपियो र अब म त्यो अवस्थामा पुगेको छु। र त्यसपछि मैले यो बुलेशिट मात्र हो भनेर महसुस गरें। ” तर [क्रसटलक 00:37:05] कामहरूको कि कलंक मान्छे काम गर्दछ।
ड्रग्सको साथ, के तपाईंले आध्यात्मिकतालाई बोलाउनुहुनेछ, यो भांग वा मशरूमको साथ होस्। यो पनि मनोविज्ञान हो, हैन? अध्यात्म, मनोविज्ञान। यो हाम्रो दिमाग को कल्याण हो। हामी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्छौं, र त्यो आध्यात्मिकता पनि हो। यो त्यस्तो जस्तो हुन्छ जब तपाईंसँग उचित मानसिक स्वास्थ्य हुन्छ र एउटा परिप्रेक्ष्य जहाँ तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, "तपाईंलाई थाहा छ के, तपाईं PTSD वा शारीरिक, वास्तविक पीडाको लागि लिइरहनुभएको छ, तपाईं अझै पनि एक मानवको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। र मानिसहरू त्यो जागरूकताविना बाँच्दछन्। तिनीहरू त्यस अनुग्रहको भावना बिना बाँच्दछन्। किनभने तिनीहरू यसलाई लिन डराउँछन् किनभने यो अवैध छ।
र यसैले मलाई लाग्छ, यो सबै जिम्मेवार हुने बारे हो। मलाई लाग्छ हामी समाजको रूपमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। हामी हाम्रो कानून संग जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ र हामी आफैं जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। र तपाइँलाई थाहा छ, यदि तपाइँ गैरजिम्मेवार रूपमा ड्रग्स लिनुहुन्छ वा तपाइँसँग गैरजिम्मेवारपूर्ण नियमहरू छन् र तपाइँ केवल कुनै नियमहरूसँग डिक्रिमिलाइज गर्नुहुन्छ भने, म त्यो लागि पनि होइन।
त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग यी कुराकानीहरू छन्। हामीले अनुसन्धान गर्छौं जुन हामीले गर्नुपर्दछ, र हामीसँग रचनात्मक छलफल हुन्छ जुन हामी गर्न सक्दछौं ... म इमान्दार हुनेछु, मलाई व्यक्तिगत रूपमा कानुनी ढाँचा कस्तो हुनुपर्दछ भनेर थाहा छैन। र त्यसैले किन मेरो नाफामुखी रहित छैन, म अहिले सीधै डिक्रीमिनेसन गर्न गइरहेको छैन। म के गर्न खोज्दै छु जागरूकता बढाउनु हो, मेरो लागि मात्र होइन समाजलाई। किनकि म सही कानुनी रूपरेखा पत्ता लगाउन चाहन्छु र त्यहाँ अन्य स्थानहरू जस्तै केभिनलाई डेन्भरमा हेर्नुहोस्, मैले उहाँसँग कुरा गरें। उनले डेक्रिनाइज्ड डेन्भरलाई अग्रणी बनाए, ओकल्याण्डका केटाहरूसँग कुरा गरे। मैले मानिसहरूलाई वास्तवमै देश भरमा कुरा गरेको छु र तिनीहरूले ठूलो काम गरेका छन्।
तर अहिले मलाई व्यक्तिगत तवरले, मैले आफैंमा सचेतना नबढुञ्जेल केही कानून बनाउने बारेमा मलाई राम्रो लाग्दैन र यही कुरा गर्न म प्रयास गर्दैछु कि फ्लोरिडावासीहरु बीच देश, विश्व र मेरो बीचमा सचेतना जगाउने। ताकि हामी यसको लागि नियमहरूको सन्दर्भमा यहाँ सही समाधानमा आउन सक्दछौं।
खैर, यो कडा प्रकारको छ। हामी बिरूवा वा कुनै चीजलाई बढावा दिन्छौं र त्यसपछि यो त्यस्तो प्रकारको हो कि, "हे बच्चाहरू, अगाडि बढ्नुहोस् र केही झार पिउनुहोला, तर म अरू कसैको पनि कमबख्त बच्चाहरूको लागि जिम्मेवार हुन चाहन्न, जहाँसम्म, मैले गरेन झारपातलाई भन। मलाई थाहा छ यो अहानिकारक छ, म साच्चै चुक्दै गर्दिन। यो तिनीहरू जस्तै छ ... तर-
म वास्तवमै न्यूनतम उमेरको प्रोटेक्टर हुँ। मलाई लाग्छ यदि मैले यी ड्रग्सलाई एक युवाको रूपमा लिनु परेको थियो, मलाई लाग्छ म, तपाईंको मस्तिष्कलाई लाग्दैन कि पर्याप्त विकसित भयो। तर एक वयस्क मानिस को रूप मा, यदि तपाईं एक निश्चित अभिप्राय संग यी औषधीहरु लिइरहेका छौं, यो MDMA हो कि, एमडीएमए PTSD, psilocybin मशरूमको साथ मद्दत गर्दछ, यी सबै मनोवैज्ञानिक भित्रका कोटीहरू हुन्। र यदि तपाईं वयस्क हुनुहुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई सही मनसाय र सही समझको साथ लिनुभयो भने, म साच्चिकै विश्वास गर्दछु तिनीहरू औषधी हो। तर यदि यी लागूपदार्थको दुरुपयोग गरियो भने, तिनीहरू अत्यन्त हानिकारक पनि हुन सक्दछन्। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग कुराकानी बस।
यो फ्लोरिडा वा जुनसुकै राज्यमा भांग सम्बन्धी कानूनहरू जस्तै छ, तपाईं मानिसहरूलाई एक जटिल सवालमा तर्कपूर्वक, प्रत्यक्ष ज्ञान, इमान्दार परिप्रेक्ष्यमा लैजान भनिरहनुभएको छ जुन उनीहरूलाई निश्चित तरिकाले महसुस हुन्छ। कसैको लागि केवल यो भन्नु सजिलो छ, "होइन, म यसलाई समर्थन गर्दैन। मलाई केहि चाहिएको छैन। ” किनभने त्यसोभए तिनीहरूले केहि सिर्जना गर्नुपर्दैन जसले तिनीहरूलाई महसुस गराउन लगाउँछ कि उनीहरूले केहि प्रश्न गर्नु पर्ने छ, वा तिनीहरूले यस्तो परिवर्तन गर्नुपर्दछ जुन पहिले कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन।
त्यसोभए तपाईंले यी नयाँ क्यानाबिस कानूनहरू फ्लोरिडामा पाउनुहुनेछ जहाँ तपाईंसँग million 50 मिलियन वा इलिनोइसमा हुनुपर्दछ जहाँ it's 4,000० लाइसेन्सहरूको लागि for००० अनुप्रयोगहरू हुन्छन्। त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ कि मानिसहरूले इलिनोइस राज्य मुद्दा हाल्ने छन् र इजाजत पत्रको लागि समाधान गर्न को लागी प्रयास गरिरहेका छन्। र कम्तिमा त्यो बढ्दो पीडा हो कि हामीसँग विधायिका परिवर्तन छ कि छैन भनेर पक्का गर्न यो प्रक्रियाको माध्यमबाट काम गरिरहेका छौं। तर मेरो मतलब, यो यति घृणित छ कि यो सजिलो छ। सब भन्दा सजिलो कुरा भनेको भनेको हो, "कुनै पनि तरिका छैन, ती सबैलाई पक्राउ गर्नुहोस्।"
र त्यो वास्तवमै हो, यो प्रकारको हो जुन नगरपालिकाहरूले यहाँ फ्लोरिडामा गरिरहेका छन्। हाम्रो अधिकारमा औषधालयहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार उनीहरूसँग छ। त्यस मध्ये धेरैले भनेका छन्, "हामी हाम्रो अध्यादेशमा कानुनी रूपरेखा के हुनुपर्दछ भनेर आउन चाहँदैनौं। हामीसँग एउटा लाइनर राख्नको लागि यो सजिलो छ कि "फ्लोरिडा विधान 381.986 XNUMX१..XNUMX .XNUMX को आधारमा तिनीहरू प्रतिबन्धित छन्।" "बूम, हामी सक्यौं। हामीले यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। अन्य नगरपालिकाहरूलाई यो पत्ता लगाउन दिनुहोस्। तिनीहरू प्रयोगका लागि प्रयोगशालाहरू हुनेछन्। एक पटक तिनीहरूले के गर्छन्, तब हामी विचार गर्नेछौं, संशोधन गर्दै। वास्तवमा अहिले के भइरहेको छ कि ती अन्य नगरपालिकाहरूले जस्तै संघीयताले राज्यहरूलाई प्रयोगको प्रयोगशाला बनाउन अनुमति दिन्छ -
त्यसोभए त्यो ठूलो छ। अब हामी राज्य ऐनको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। मलाई लाग्छ यसले १ the औं संशोधन उल्लंघन गर्दछ। राज्य ऐनको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
ठ्याक्कै मेरो भनाइ हो, राज्य अधिनियमसँग यसमा धेरै राम्रो भाषा छ, यसमा यसमा धेरै नराम्रो भाषा छ। मलाई मन पर्छ कि छलफल कम्तिमा पनि संघीय सरकारको कम्तिमा केही हदसम्म राज्य कानूनको सम्मान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र राज्यको ऐनको बारेमा जनताले नबुझेको कुरा के हो, यो वास्तवमै संघीयतालाई कोडिफाइ गर्दैछ र राज्यहरूलाई प्रयोगका प्रयोगशालाहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। म तपाईको विश्लेषण के सुन्न उत्सुक छु यति टाढा किन यो-
किनभने तब यसले संघीय कानून लिन्छ र यसले राज्य कानूनहरूमा प्लगहरू खाल्छ। त्यसोभए अब तपाई संघीय व्यक्तिलाई बिभिन्न राज्य रुब्रिकको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ र जस्तो कि यदि म इन्डियानामा छु, म एक अपराधी हुँ, तर यदि म पनि त्यस्तै आचरणको लागि इलिनोइस हुँ भने, म स्वतन्त्र मानिस हुँ। र यसैले यो दास राज्य स्थापना गर्दछ, स्वतन्त्र राज्य समस्याको। यो गुलाम राज्य होइन, यो आपराधिक राज्य हो, तर यदि तपाईं कसैलाई अपराधी गर्न सक्नुहुन्छ, १ you औं संशोधन अनुसार तपाईं तिनीहरूलाई एक दास बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए यसले गैर-समान संघीय कानून सिर्जना गर्दछ जसले राज्यमा आधारित फरक फरक व्यवहार गर्दछ कि तिनीहरू समान कार्यको लागि छन्।
[सुन्न नसकिने 00:42:48] ठिक छ, किनकि म वकिल मान्छे होइन, म यहाँ मात्र एक प्राविधिक हुँ। त्यसोभए यो राज्य कर जस्तै छ जसले भन्छ, "ठीक छ, हामी प्रत्येकले व्यक्तिगत तवरले आफ्नै काम गरिरहेका छौं," भांग कानूनीकरण जस्ता, सही। र केहि बानीहरूमा यो छैन र यो अझै पनि पर्याप्त कानूनी रूपमा समग्र अवैध छ। जहाँसम्म मुद्दा को रूप मा, त्यसो भए कसरी यस्तै अन्य मुद्दाहरु अमेरिका मा अवस्थित छ?
कुनै पनि होइन।
हामी सबै जना सहमत छौं कि बच्चाको चुदाई खराब हो, तर हामी सहमत हुन सक्दैनौं कि यो सौम्य बोट हुनु पर्छ ... त्यो समस्या हो। राज्य कार्यहरु मलाई लाग्छ कि यो एक महान कुरा हो, किनकि यदि हाम्रो समाजमा यति गहिरो प्रश्नहरू छन् कि तिनीहरू आपत्तिजनक हुनेछन्। त्यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन हामीले सोध्नु पर्छ, तर यो प्रश्नको उत्तर भइसक्यो। हामीले कमबख्त हुर्कनु आवश्यक छ, निश्चित तहमा चीजहरू वैध बनाउनुपर्दछ, एक अर्कालाई शिक्षा दिनुपर्दछ, जस्तै हामी सबैलाई थाहा छ धेरै पिउनु खराब हो, र यो हुन्छ [क्रिस्टल ०::00::43]। तर तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ-
मलाई लाग्छ के बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि जब तपाईं ठूला कम्पनीहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई निर्णय लिनको लागि यो धेरै गाह्रो छ। तिनीहरूले धेरै समय लिन्छन्। उनीहरूसँग निर्देशकहरूको एक बोर्ड छ, तिनीहरूसँग साझेदारीकर्ताहरू छन् जसलाई जवाफ दिन, जब तपाईं साना कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरू द्रुत निर्णय लिन सक्दछन्। यो राज्य र बनाम संघीय सरकारको जस्तै धेरै समान छ। संघीय सरकार एउटा ठूलो जहाज हो जुन एक मोड लिन खोज्दै छ र तिनीहरू केवल पूरा मोड बनाउन सक्दैन जति एउटा राज्यले पालो बनाउन सक्छन्।
र यसैले उनीहरू यी शिशु कदमहरू चालेर मुद्दाको वरिपरि झेलिरहेका छन् र केहि अगाडि र बिस्तारै धकेल्छन् तर पक्कै पनि म ढुक्क छु कि त्यहाँ भांगको यो संघीय प्रतिबन्धको परित्याग हुनेछ। यो केवल जहाज ठूलो छ र यो धेरै, सार्नको लागि धेरै गाह्रो।
हो तर त्यहाँ अरू कति नैतिक प्रश्नहरू छन्? म सोच्न सक्ने कुनै छैन।
यसैले म क्यानाबिस कानून गर्छु किनकी यो अनौंठो हो र यो यति फरक छ। यसैले म र मेरो जस्तै थॉमस म लाग्छ कि मान्छे हो ... यो महत्वपूर्ण छ जब म मानिसहरूलाई बताउँछु यदि तपाई एक प्रकारको भांग कम्पनी शुरू गर्न को लागी कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं एक वकील संग व्यवहार गरिरहनु भएको छैन कि उनीहरूलाई भांग संग के गरिरहेछन् भनेर वास्तवमै थाहा छ, तपाईं सबै प्रकारका बाइन्डहरूमा चलाउन लाग्नुहुनेछ, किनकि यो अरू कुनै ईन्डस्ट्री जस्तो छैन। केहि रमाईलो राज्यहरूमा रक्सीलाई व्यक्तिले तुलना गर्न सक्छन्, यो रक्सी होइन। यो बाटो गहिराइ हो।
के तपाई मान्छेहरु लाई थाहा छ अन्य प्रहरी कनाबिस वकील को बारे मा सचेत हुनुहुन्छ कि कुराकानीमा पछिल्लो समाचार मा?
ओ हो केटा जो प्रतिनिधित्व गर्दै -
Parnof। मँ अब यो मान्छे भन्न सक्दिन, र किथ स्ट्रउपले उसको बारे मा सबै सामान्य कानुनी सल्लाहलाई पठाएको थियो, तर मलाई लाग्छ कि उनी भैँसी र उनको अपराधी मन पराउँछन् भन्ने अर्थमा उनी आपराधिक बचाव पक्षका वकिल हुन्। क्लाइन्टहरू स्वरहीन रूपमा, तर मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले यसलाई कानूनी स्कूलमा भोकले कल गरे। मलाई लाग्छ उनीहरूले यसलाई जोसका साथ बोलाए, तर अझै हो, मलाई उसको नाम याद छैन, तर ऊ अपराधिक वकिल हो जो-
रड्डी म केवल यो तथ्यलाई मात्र सोच्छु कि उनले [अवाक्य ०::00:45::38] अदालतमा मारिजुआनाको नैतिकताको लागि आफैलाई स fight्घर्ष गर्न खोज्यो, तर एकैचोटि ऊ त्यहाँ फ्याँकिएको यो मान्छेलाई बचाउन सहयोग पुर्‍यायो, जस्तै राष्ट्रिय समाचार। । हो, यो पैसा हो, तर-
जाँच गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यस्तै चीज हो। यदि उसले त्यो पैसा तिर्दछ भने उसले युक्रेनबाट नराम्रो रूपमा कमायो र उसले यसलाई स्ली वा उसको नाम जे तिर्छ, र उसले त्यो आफ्नो बैंकमा लग्यो र यसलाई जम्मा गर्‍यो। उनीहरूले उसलाई लात हान्दैनन् किनकि ऊ एक टियर २ एमआरबी छ। अब, यदि म मेरो कानून फर्मको लागि त्यसो गर्न कोसिस गर्छु, किनकि मेरो ग्राहकले मलाई 2० भव्य भुक्तानी गर्छ, मलाई इलिनोइस राज्यको मुद्दामा जान १०,००,००० डलर तिर्दछ ताकि म इजाजतपत्रको लागि व्यवस्था गर्न सक्दछु। मेरो बैंकले मलाई बन्द गर्न सक्छ किनभने तिनीहरू यस्तो हुनेछन्, "होइन, यो तपाईको भिन्नता हो, यदि तपाई कसैलाई अपराधको लागि बचाउदै हुनुहुन्छ भने, यो ठीक छ। तर यदि तपाइँ कसैलाई एउटा अपराध तोक्नको लागि रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ टियर २ एमआरबी हुनुहुन्छ। "
अ अ। मेरो मतलब, मलाई लाग्छ यो भिन्नता छ मलाई लाग्छ भांगको ठाउँको वकिलको रूपमा हामीलाई वास्तवमै टिप्टो लाग्छ किनभने प्राविधिक रूपमा यदि हामी ... यदि तपाईं एक अपराधीको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एक अपराधीको रक्षा गर्न अनुमति दिइन्छ। तर त्यस हदसम्म मारिजुआना संघीय रूपमा अवैध छ, जब तपाईं भांग लेनदेनलाई सजिलो बनाउने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं एम एण्ड ए डिल गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं कुनै घर जग्गा सौदा गरिरहनु भएको छ, जुनसुकै भए पनि।
त्यो त्यहि वास्तविक संघीय अपराधहरू पत्ता लगाउनु जस्तै हो।
बुझ्नको लागि, तपाईंको केटा 'आवश्यकता, तपाईंको केटा' महत्व। टमको र तपाईको डस्टिनको कुरा जहाँसम्म चीजहरूको व्यवसाय पक्ष हो, यो अमेरिका जस्तो कसरी हामी व्यापार समाप्त गर्न सक्दछौं र यो हाम्रो नागरिकता हो। यो हामी कसरी, तपाइँका अनुबन्धहरू र के छैन। यो मनपर्दैन -
खैर, यसको मूल मा अमेरिका एक सम्झौता हो। [सुन्न नसकिने ०::00:47:२०] संविधान हो, त्यसैले अमेरिकाले वास्तवमै यस कर्पोरेट विचारलाई जन्म दियो। मैले महसुस गरे कि तपाईले डच ईस्ट इण्डिया कम्पनीमा निगमहरू फेर्नु हुनेछ। तर त्यो डचहरूका लागि थियो, जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, यस्तो देशको अवधारणाबाट जुन अन्य संस्थानहरूलाई र अन्य सम्झौताहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ। अझै अमेरिका यस भन्दा पहिले अन्य कुनै पनि देश जस्तो छैन।
हो र हामी राज्यको [सुन्न नसक्ने 00:47:49] कुरा गरिरहेको कुरालाई फर्काउन, अब केहि राज्यहरू यो आपराधिक हुनेछ र अन्य राज्यहरू यो आपराधिक हुनेछैन। यसले सबै प्रकारका भ्रम पैदा गर्दछ। के हामीले उद्योगमा कहिल्यै देखेका छैनौं एक स्थिति हो जहाँ यी एमएसओहरू, बहु-राज्य अपरेटरहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। तिनीहरूसँग प्रत्येक राज्यको लागि बिभिन्न लेबलहरू र फरक SOPs हुनुपर्दछ जुन तिनीहरू पालना गर्छन्। यो अत्यन्त अक्षम छ। यसैले म ASTM D37 मा धेरै संलग्न छु जुन भांग उद्योगको भूमण्डलीकरण मापदण्ड हो। र हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरू कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने बारे विश्वव्यापी मापदण्डहरू नभएसम्म, उनीहरूलाई कसरी लेबल लगाइनेछ, कसरी प्याकेज गर्ने, कसरी उनीहरूको निपटारा गरिनुपर्छ।
जबसम्म हामीसँग चीजहरू गर्नका लागि मानकीकृत तरिकाहरू छैनन्, उद्योग अत्यन्तै अक्षम हुन जारी रहनेछ, र यी भांग कम्पनीहरूको लागि व्यवसाय गर्ने लागत अत्यन्तै उच्च हुनेछ। र यसैले मलाई लाग्छ यी यी केहि शेयर मूल्यहरू जुन तपाईले पल्मेट हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मतलब धेरै कारणहरूको लागि हो। तर ती मध्ये एउटा न्यायसंगत छ, कसैले पनि अनुमान गर्न सक्तैन कि त्यहाँ अत्यधिक लागत राज्यबाट राज्यमा सजिलो अनुपालनमा छ। तपाईंसँग केवल हुन सक्दैन, "हे यो हाम्रो लेबलहरू हुन् र हामी प्रत्येक राज्यमा कसरी बेच्ने छौं।" हैन, प्रत्येक राज्य जब तपाईं एक MSO हुनुहुन्छ, तपाईंसँग प्रत्येक राज्यको आफ्नै लेबलहरू हुनु आवश्यक छ र के अनुमान गर्नुहुन्छ? तपाईं राम्रोसँग कुनै पनि कानूनी परिवर्तनहरूको शीर्षमा यी लेबलहरूको सम्बन्धमा रहनुहुन्छ किनभने कानून प्रत्येक र हरेक राज्यमा धेरै चाँडै परिवर्तन हुन्छ। त्यसोभए १०,००,००० लेबलहरू नखानुहोस् किनकि तपाईं त्यसमा दुई पैसा पनि बचत गर्न सक्नुहुनेछ किनकि अर्को दिन नै परिवर्तन हुन सक्दछ। त्यसोभए त्यहाँ चुनौतिहरू मात्र छन्।
हो होइन। किनभने हरेक एक राज्यको आफ्नै चीज हुन्छ। र त्यसोभए तपाईसँग एक आपूर्ति श्रृंखला छ र आपूर्ति श्रृंखला राज्यको आधारमा राज्यमा छ। किनकि सबै उत्पादनहरू एक विशिष्ट राज्यमा हुर्कनुपर्दछ। त्यसोभए तपाईले कुनै पनि अर्थतन्त्रहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटर बन्न जस्तो तपाई यी एमएसओहरूको लागि। तर त्यसोभए तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुने व्यवसायको उच्च मूल्य हो, किनकि कसैले भ्यागुता खेलमा छिमेकीलाई भेट्ने बित्तिकै तपाईले सबै पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ र उनीहरूले तपाईको मुल्य ज्याक गर्छन् किन कि तपाईलाई लाग्छ कि तपाई पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ। मुट्ठी माथि हस्तान्तरण
र हामी ब्याकस्टेजमा कुरा गरिरहेका थियौं उत्पादकहरू र के प्रकारको नगदी प्रवाहको बारेमा उनीहरूले फ्याँक्न सक्छन्। हो, यो क्यासफ्लो व्यवसाय हो, तर यो एक पूँजी र नगद सघन व्यवसाय हो। त्यसोभए किनभने यसले धेरै क्यासफ्लो गर्न सक्छ, यसको मतलब यो होइन कि यसलाई गर्न धेरै खर्च लाग्दैन यदि तपाईंलाई यो अधिकार पनि प्राप्त भयो भने। र यी सबै चीजहरूले समस्याहरू सिर्जना गर्दैछन्।
तर अर्को चीजहरू जुन हामीले अर्को दशकको अवधिमा साझेदारी गर्नुपर्दछ मध्ये एउटा मारिजुआना वर्दी व्यवसायिक कोड, वा भांगको व्यावसायिक कोड, वा त्यस्तै केही हो जहाँ तपाईं लिनुहुन्छ र तपाईं यी मानक गर्नुहुन्छ। किनकि यो कुनै पनि अन्य कानूनहरू जस्तै हुन गइरहेको छ, जस्तै एरा भर्खरै 38 70 औं राज्यमा पुग्यो। यो ठीक 25० को दशकमा पारित भयो। तर त्यसबेला हामीसँग त्यो थियो, मलाई लाग्छ कि यो २th औं संशोधन थियो जुन १ 1789 XNUMX in मा पारित भएको थियो। तर केहि बर्ष अघि यो लाग्यो वास्तवमा यो कोडिफाइ हुनु अघि। मलाई थाहा छैन, म संवैधानिक विद्वान होइन, म कहिले पनि संवैधानिक विद्वान भएको छैन।
कानून स्कूल म अहिलेको भन्दा संवैधानिक कानूनमा भन्दा राम्रो थियो।
हो किनकि तपाई वास्तवमा, यो तपाईको जीवनसंग प्रासंगिक थियो। तर यो ठीक छ। र यसैले मलाई यो मनपर्दछ, किनकी यो एक ऐतिहासिक मुद्दा हो र यो एक यस्तो मुद्दा हो जुन अरू केहि भन्दा फरक छैन र यसमा यती धेरै बिभिन्न अनुप्रयोगहरू छन्। त्यसोभए यो केवल कृषि, अनुपालन, कर्पोरेट होइन, यसले ती सबै चीजहरूलाई छुन्छ र यो आकर्षक छ।
र एउटा चीज जुन म फेरि सर्कल गर्न चाहान्थें त्यो हो हामीले फ्लोरिडामा कसरी सुरुमा थोरै थोरै थोरै थियौं र हामीलाई थाहा भएन ... हामीसित धूम्रपान योग्य फूल थिएन र त्यो अन्तिम विधायकीय सत्रमा परिवर्तन भएको थियो। अब हामीसँग धुम्रपान योग्य फूलहरू छन्, र म तपाईंलाई भन्दछु वर्तमान लाइसेन्सदाताहरूले यसलाई पर्याप्त चाँडो उत्पादन गर्न सक्दैनन्।
… कसैले पनि फूलको मागको पूर्वानुमान गर्न सक्दछ। र सबै जना वानरहरू र यी सबै चीजहरू, फूल- को बारेमा उत्साहित भए।
मिग्गी, तपाईले भविष्यवाणी गर्नुभयो?
यार, त्यसैले तपाईले पहिले नम्बरको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो, यो सबै पूर्वानुमान योग्य छ। भांगको लागि बजार ठूलो छ। तथ्य यो हो कि तपाईले चार उत्पादकहरूसँग सुरु गर्नुभयो, [सुन्न नसकिने ००:00१:51] तपाईंको संस्कृति, जे भए पनि, तपाईंको उपभोक्ता अनुभव। तर अब तपाईसँग धेरै व्यक्ति, धेरै विविधता, अधिक अनुभवहरू छन्। यो यसको आफ्नै चीजमा परिवर्तन हुन गइरहेको छ, यसको आफ्नै… त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ जो घटनाहरू गर्दैछन्। त्यहाँ कोही छ कि हुन गइरहेको छ ... सबै सहायक जस्तै हुन्छ तपाईं ट्रान्सपोर्टरहरू र के बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यो साँच्चिकै राम्रो विचार हो त्यहाँ क्र्याrac्कि that खुला छ कि तपाईं ती सबै सहायक व्यवसायहरूलाई त्यहाँ बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले केहि भन्नु भयो जुन मैले सोचें कि यो चाखलाग्दो छ, किनकि म फ्लोरिडाका वकिल होइन। म कहिल्यै फ्लोरिडा बार परीक्षा लिने उद्देश्य राख्दिन। भविष्यमा के हुन्छ हामी हेर्नेछौं। तर त्यसोभए तपाईहरू संविधानमा संशोधन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि व्यवस्थापिकाले त्यसमा परिवर्तन गर्न थाल्छ? किनभने तपाईले भने कि संशोधनले भन्यो, "कम THC, कुनै धुम्रपान योग्य फूल।" र त्यसैले अब तिनीहरूले कम THC र धुम्रपान योग्य फूल पक्ष हटाएका छन्।
त्यसैले कम THC वास्तवमै संवैधानिक संशोधन हुनु अघि एक कानून मार्फत थियो। त्यसपछि संवैधानिक संशोधन आयो र वास्तवमा उच्च टीएचसी उत्पादनको लागि अनुमति दिइयो। संविधान चुरोटको सन्दर्भमा मौन थियो तर यसको माध्यमबाट ... तर त्यहाँ मुद्दा दायर गरिएको थियो र मुद्दामा मूलभूत रूपमा राज्यपाल जब राज्यपाल बोर्डमा आए, उनले मूलतः उनले नीति बनाए कि उनी धुम्रपान योग्य गाँजाका समर्थक थिए। र त्यसैले तिनीहरूले यसलाई संशोधित गर्न कानुनलाई परिमार्जन गरे।
त्यहाँ THC क्याप राख्दा ठूलो बहस भएको थियो। र मैले यो अर्को विधान सत्रमा के बुझ्छु बाट, त्यहाँ अर्को मेडिकल मारिजुआना कार्यक्रममा THC क्याप राख्ने प्रयास गर्न अर्को धक्का छ। स्पष्ट रूपमा, त्यो उद्योगको बारे मा केहि चाखलाग्दो छ। हामी जहिले पनि प्रगति गर्न कोशिस गर्दैछौं, तर हामीले पनि हाम्रो अडान लिनका लागि झगडा गरिरह्यौं। त्यसैले अहिले उनीहरूलाई फ्लोरिडामा उच्च THC मेडिकल मारिजुआना राख्न अनुमति छ। तर त्यो [क्रसटलक ०::00::53] -
के तपाईहरूसँग भ्याप पेनहरू छन्? किनकि यो हो… यो स्वस्थताको लागि प्रकृतिको अनुग्रह हो, तर यो सम्भवतः %०% क्यानाबिनोइड्स थियो जब यो थियो-
हो, हामीसँग vape कलम छ। हामीसँग के छैन, त्यसैले यो चाखलाग्दो कुरा हो कि कानुनले खाने योग्यहरूलाई अनुमति दिन्छ, तर एजी विभाग र हाम्रो स्वास्थ्य विभागले खाने नियम र खाद्य नियमहरूमा सँगै मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यसैले फ्लोरिडामा अहिले हामीसँग खाद्य छैन, जुन मलाई लाग्छ… मलाई लाग्छ धेरै व्यक्तिहरूले खानेलाई प्राथमिकता दिन्छन् र यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि हाम्रा बिरामीहरूले खाने योग्यताहरूमा पहुँच पाउँदैनन्। फ्लोरिडामा चाखलाग्दो अर्को कुरा जुन हामी अझै पर्खिरहेका छौं उनीहरूले फ्लोरिडामा कुनै पनि तेस्रो पार्टी परीक्षण प्रयोगशालाहरू अनुमोदन गरेका छैनन्।
हो, म ग्रीन साइन्टिफिक ल्याबहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछु, जुन फ्लोरिडामा यहाँको एक प्रमुख परीक्षण प्रयोगशाला हो। र तिनीहरू, स्वास्थ्य विभाग तेस्रो पक्ष परीक्षण नियमहरु बाहिर राख्न को लागी प्राप्त भएको छैन। अब तिनीहरूले भर्खरै आपतकालिन नियम बाहिर पठाए जुन स्वीकारेनन् कि त्यसपछि राखिनेछ ... त्यसैले अहिले यी तेस्रो पक्षको परीक्षण प्रयोगशालाहरू, स्वास्थ्य विभागले उनीहरूलाई केवल ठेक्कामा गाँजा सम्हाल्न अनुमति दिइरहेको छ। त्यहाँ कुनै इजाजतपत्र छैन कि तेस्रो पार्टीको परीक्षण प्रयोगशालाहरूसँग, तिनीहरू केवल MMTC, एक मेडिकल मारिजुआना उपचार केन्द्रसँग सम्झौता गरिनु पर्छ कि त्यो परीक्षण गर्न सक्षम हुन, जुन सबै प्रकारका मुद्दाहरू सिर्जना गर्दैछ। र एकदम इमान्दारीपूर्वक, अहिले फ्लोरिडामा परीक्षण केही हदसम्म स्वयं-नियन्त्रित छ, जसको अर्थ हो, यी व्यवसायहरू हुन् र यदि उनीहरूले केहि परीक्षण गर्नुपर्दैन, यदि उनीहरूले कल गर्न सक्छन् -
[क्रसटलक ०::00:०55] आत्म-विनियमित, तपाईंले FAA सँग सम्झौता गर्न सक्नुभयो। तर त्यो इलिनोइसमा पनि आउँदैछ जहाँ उनीहरूसँग छैन ... मेरो मतलब हो, उनीहरूले परीक्षणको बारेमा सामानहरू उल्लेख गरे। त्यहाँ परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन् तर तिनीहरू नयाँ परीक्षण ल्याबहरूको लागि खुलेका छैनन् र त्यो त्यो व्यवसायिक व्यवसाय हो। उनीहरू वाशिंगटन राज्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न कोशिस गर्दैछन्, हैन त?
हो हो ठिकै छ, केहि सांसदहरूले १० बुलसिट १०% बिल धक्का दिन खोजिरहेका छन्। त्यसैले हामी आशा गर्दछौं कि, यसको मतलब यो हो, तपाईंले भनेको जस्तो तपाईले टाढा सम्म पुग्नु भयो र तपाईले पहिले नै जे लड्नु भएको छ त्यसका लागि लड्नै पर्छ।
विशेष गरी [सुन्न नसकिने ००:00:55]] बाटो, यो रोकिदैन। यो फिर्ता आउँदछ र यो यस्तै छ, "ओह, ओह, तपाईं यसलाई एकाग्र रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?" "हो"
मैले सोध्न सक्ने प्रश्नहरू यो हो, "किन? किन यतिबिघ्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग यी सीमितताहरू छन्? "
मलाई देखाउनुहोस् [क्रॉसटल्क ० 00:55:50०] जहाँ यो बोटले तपाईंलाई छोयो? मेरो मतलब, गम्भीरतापूर्वक, यसले तपाईंलाई के गर्‍यो?
हो खैर, त्यहाँ थियो ... र बितेका केही महिनाहरूमा उनीहरूले धेरै मानिसहरू, धेरै डाक्टरहरू भित्र ल्याए, धेरै राज्यको खेलाडीहरू जुन भांगको विरुद्ध थियो र तल्लाहसीमा त्यहाँ धेरै वक्ताहरू थिए जुन त्यहाँ बाहिर जाँदै। र तिनीहरू जानकारी सत्र र सुनुवाइ थिए जहाँ यी चिकित्सकहरूले मूल रूप मा उच्च THC सीमा को खतराको बारेमा कुरा गर्दै थिए। र म तपाईंलाई भन्दछु, यसले कार्य गर्ने धेरै डाक्टरहरूको साथ धेरै क्रोध पैदा गर्‍यो। र तपाइँलाई थाहा छ, अब तिनीहरूले आफ्नै सूचना सत्रहरुमा राख्न सुरु गरिरहेछन्, किन कि यो महत्त्वपूर्ण छ किन कि वास्तवमै उच्च THC को पहुँच गर्न महत्वपूर्ण छ।
र एकदम इमान्दारीपूर्वक अहिले, के हुन्छ… यदि तिनीहरू केहि गर्दै थिए भने उनीहरूले THC रकम अधिकतम गरे। सबै किसिमका तनावहरू र सबै जैव-प्रजातिहरू जुन उनीहरू अहिले बढिरहेका छन् वा केहि भागका लागि उच्च टीएचसीको लागि रोचक छ, के सही छ? त्यसो भए यदि त्यो कानून जान्छ भने, फ्लोरिडा कम्पनीहरूले रिडु गर्नु पर्ने हुन्छ र सबै प्रकार र सबै किसिमका चीजहरू र उनीहरूले गरिरहेको सबै कुरा, जुन बिरामीको पहुँच र सबै प्रकारका बिभिन्न मुद्दाहरूको कारणले सम्पूर्ण समस्या उत्पन्न गर्दछ। म आशावादी छु-
यस्तो लाग्छ कि ती THC ​​स्तरहरू सीमित गर्न कोशिस गर्दैछन्।
तिनीहरू अधिकतम छत के हो भनेर सीमित गर्न कोशिस गर्दैछन्?
१०% उनीहरूले छलफल गरेको कुरा हो।
अहँ, त्यो त्यस्तो छैन, यदि हामीसँग इथान रसो, डा। रुसो एयरमा रहेको भए, ऊ जस्तो देखिन्थ्यो, "होइन, यो भांगको स्तर दुई चेमोवार छ।" यस अर्थमा ती ती सन्तुलित मानिसहरु हुन् किनकि तपाईसँग २० देखि एक अनुपात हुन्छ जुन तपाईको CBD हेम्प जस्तै तपाईको लिफ्टर तानहरु जस्तै हुन्छ। र त्यसपछि तपाईंसँग विपरित अनुपात हुन्छ कि कहिलेकाँही यो केवल सबै THC हुन्छ र त्यो तपाईंको गोरिल्ला ग्लु जस्तो हुन्छ। र त्यसो हो भने यदि तपाइँले यो गोरिल्ला लिफ्टर गर्नुभयो भने, त्यसो भए त्यो सन्तुलित एक-देखि-एक THC CBD अनुपातको हुनु पर्छ। र ती पनी १०% भन्दा बढि जान सक्छ, त्यसैले तपाईले अझै आफ्नो फूल हेरिरहनु पर्छ। र त्यसोभए तपाईं पाउनुहुन्छ, यो यस्तो भनिन्छ जस्तो गरीन्छ कि तपाईंले अब सबै स्याउहरू लिनुपर्नेछ जब उनीहरू अप्राप्य छन्।
मलाई लाग्छ के, हामी केवल अधिक धूम्रपान गर्नेछौं। यदि तपाईंले १०% THC मारिजुआना भन्दा बढी बोल्नुभयो भने, तपाईं अधिक गाँजा खान्दै हुनुहुन्छ र सायद अझ उच्च पाउनुहुनेछ। तपाईले बढि पैसा खर्च गर्नु भयो। त्यसोभए यसले उपभोक्तालाई चोट पुर्‍याउने छ, बिरामी जसले थप गाँजा किन्नु पर्दछ केवल पुग्नको लागि -
फ्लोरिडामा अझै कुनै बिरामी घर बढेको छैन, हैन?
सही त्यसोभए घर बढ्नु ठूलो समस्या हो। स्पष्ट रूपमा २२ इजाजतपत्रहरू मलाई लाग्छ कि यो यसको बिरूद्ध लबीमा जाँदै छ। र २२ लाइसेन्सहरू हुन्-
बिरामीहरूको लागि वा वयस्कहरूको लागि?
मलाई लाग्दैन कि २२ लाइसेन्सदाताहरू घर बढेको चाहान्छन्।
हो, हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन। तर दिनको अन्त्यमा, यी २२ इजाजतपत्रहरू, मैले भनेको जस्तै फ्लोरिडामा यो अत्यन्त बजार हो। यी २२ इजाजतपत्रकर्ताहरूको पछाडि धेरै पैसा छ र धेरै लोबिस्टहरू जो अहिले तल्लाहसीमा छन् उनीहरूको तर्फबाट पैरवी गरिरहेका छन्। त्यसोभए त्यो एउटा ठूलो अवरोध हो जुन तपाईंले पार गर्नुपर्नेछ भन्ने तथ्य यो हो कि तपाईंले यी २२ लाइसेन्सरहरू धेरै पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्थ्यो घरलाई [सुन्न नसकिने ००:22:22::22०] बाहिर राख्नका लागि। अब हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन, त्यहाँ हुन सक्छ ... मैले कुरा गरेको छैन, म सबै इजाजतपत्रहरूको तर्फबाट बोल्न चाहन्न। हुनसक्छ तिनीहरू मध्ये कोही यसको समर्थनमा छन्। तर एक व्यापक परिप्रेक्ष्यमा, सम्भवतः उनीहरूले बढेको घरको बिरूद्ध केही प्रकारको स्थिति लिनेछन्।
तपाईलाई थाहा छ, तपाईहरू धेरै पैसा गुमाउँदै हुनुहुन्छ औंल्याइको लागि कि रमाईलो पनि पर्यटन डलर तिर जान्छ। किनभने अहिले तपाईंको मेडिकलको १००% ग्यारेन्टी छ। मेरो मतलब, त्यहाँ तिनीहरू डाइभर्सन भन्छन् नहुन सक्छ, राज्य छोड्नुहोस्, के होईन। तर म तपाईंलाई ग्यारेन्टी गर्छु कि मेडिकल खरीदहरू स्थानीय बासिन्दाहरू, गैर-चिकित्सा बिरामीहरूलाई गइरहेका छन्। यति चाँडै तिनीहरू मनोरञ्जन को लागि कि मेडिकल खरीद छ, वा मनोरन्जन को खरीद, तपाईं त्यो मान्छे मा खींचने जाँदै हुनुहुन्छ जो उसले कालो बजार भन्छ कि पुलिंग गर्दै छ, तर यो साथी हो जो चिकित्सा हो। तपाइँ त्यो बजार प्लस पर्यटन पाउँदै हुनुहुन्न। जस्तै तपाईले पर्यटनलाई मंद बनाउनु भएको छ, त्यस्तै गरी तपाईं बस्नु भयो।
ओह, त्यो पागल हो। मेरो मतलब, त्यसकारण यी व्यक्तिहरूले यहाँ इजाजतपत्रमा यति धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छन्, हैन? मेरो मतलब, हेर, तिनीहरू it००,००० बिरामीहरूको लागि गरिरहेका छैनन्। तिनीहरू यो हाम्रो लागि २० करोड व्यक्तिको जनसंख्या, साथै सबै पर्यटनको लागि गरिरहेका छन्। त्यसोभए ती केटाहरू होइनन् ... हामीसँग कागजको एक टुक्राको लागि $ 300,000 मिलियनको लागि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मानिसहरू छैन किनकि उनीहरू सोच्दछन् कि उनीहरूले 20००,००० बिरामीहरूको पहुँच पाउन सक्दछन्। तिनीहरू यो गरिरहेका छन् किनभने उनीहरूले देख्छन् कि जब यहाँ फ्लोरिडामा मनोरन्जन हुन्छन्, यो अवसर ठूलो अवसर हुनेछ। र एकदम इमान्दारीपूर्वक, यो गैंगबस्टरहरू हुन गइरहेको छ।
त्यहाँ धेरै हुन गइरहेको छ, धेरै पैसा कमाउनु पर्छ। त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ। तिमीलाई थाहा छ मेरो मतलब के हो? दिन को अन्त्य मा हेर्नुहोस्, यो एक व्यापार जस्तै छ। तपाईं केटाकेटीहरू सक्षम हुन सक्नुहुनेछ, म धेरै मानिसहरूलाई भन्छु, तिनीहरू यस उद्योगमा जान चाहन्छन्, तिनीहरूलाई लाग्छ कि यो सजिलो पैसा हो। होईन, यो अरू कुनै व्यवसाय जस्तै छ। तपाईं चलाख हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंले व्यक्तिहरूसँग काम गर्न सक्नुभयो जुन जान्दछन् कि उनीहरू के गरिरहेछन्, सहि वकीलहरू, सही लेखाकारहरू, सही वित्त मानिसहरू, सही लगानीकर्ताहरूसँग काम गर्नुहोस्, र तपाईंले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो। अरू कुनै व्यवसाय जस्तै। Buck- बनाउनको लागि त्यहाँ कुनै सजिलो तरीका छैन।
त्यो ठूलो हो, यसले हामीलाई यहाँ ल्याउन सक्छ जुन हामी यहाँ लपेट्न सक्दछौं। त्यसोभए डस्टिन, २०२० मा फ्लोरिडा मारिजुआनाका लागि तपाई कस्तो प्रकारको भइरहेको देख्नुहुन्छ?
खैर, २०२० मा फ्लोरिडा मारिजुआना? त्यसैले अहिले हामीसंग यो सर्वोच्च अदालतको केस भइरहेको छ। हामीसँग त्यो बिल पनि छ जुन मैले विधायिकामा रहेको कुरा गरेको थिएँ। मैले त्यो बिल पास भएको देख्दिन। म आशावादी छु, यदि यसले त्यसो गर्छ भने महान छ, हामी यहाँ मनोरन्जन हुनेछ। मैले त्यो बिल पास भएको देख्दिन। फ्लोरिडा सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा कुनै फैसला नगरेसम्म मैले विधायकले केहि गरेको देखिरहेको छैन। मामला, यो फ्लोरिडा ग्रोउन केस हो। त्यो त्यस्तो कम्पनी हो जुन मुद्दा लाई ल्याईएको छ र मलाई आशा छ कि सर्वोच्च अदालतले आगामी केहि महिनामा यस बारे फैसला सुनाउनेछ, यो विश्वास गर्दै कि उनीहरूले तल्लो अदालतलाई पुष्टि गरे। सम्भवतः व्यवस्थापिकाले विशेष सत्रमा फिर्ता जानुपर्नेछ। तिनीहरूले कानून संशोधन गर्नुपर्नेछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि विधायी प्रक्रियाले कसरी लामो समय लिन सक्छ।
तब डीओएचले नयाँ नियमहरू रिलिज गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि डोएचले अनुप्रयोगहरू जारी गर्नुपर्नेछ। र त्यसपछि तिनीहरूले अनुप्रयोगहरू स्वीकार गर्न सुरू गर्नेछन्। त्यसो भए, म धेरै, धेरै आशावादी छु कि हामीले २०२० मा जारी गरेका केही इजाजतपत्रहरू पाइनौं। म धेरै, धेरै शंकास्पद छु कि हामीसँग २०२० मा इजाजतपत्रहरू छन्। सम्भवतः त्यहाँ कुनै थप लाइसेन्स जारी हुने छैन। कमसेकम २०२१ दुर्भाग्यवश।
तर म आशावादी छु, र त्यसैले म अन्य राज्यहरूमा सुपर सक्रिय भइरहेको छु। यसैले मैले केही इलिनोइस अनुप्रयोगहरूमा तपाईसँग काम गरें। मैले तपाईंलाई प्राप्त गरेको केही थप अनुप्रयोगहरूमा तपाईंसँग काम गर्ने योजना गर्दैछु। मैले वेस्ट भर्जिनियामा एउटा समूह पाएँ। मैले जर्जियामा काम गरिरहेको समूह पाएँ। साच्चिकै बिभिन्न बिभिन्न समूहहरूसँग काम गर्दै उनीहरूलाई पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्न। र तिनीहरू मध्ये धेरै फ्लोरिडामा आधारित कम्पनीहरू हुन् जसले अन्य राज्यहरूमा पनि विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्।
तर त्यहाँ धेरै चीजहरू गर्नु बाँकी छ। म आशावादी छु, मैले भनेजस्तै, तेस्रो पार्टी परीक्षण प्रयोगशाला नियमहरू, म आशावादी बाहिर आउँदछु। म आशावादी छु कि त्यहाँ यी तेस्रो पार्टी परीक्षण प्रयोगशालाहरूको इजाजतपत्र दिईनेछ ताकि… र फेरि फेरी सर्कल गर्नुहोस्, यो सबै बिरामीको बारेमा छ। म बिरामीलाई उत्तम उत्पादन पाएको चाहान्छु जुन उनीहरूले पाइरहेका छन्। र यदि यस उत्पादनलाई परीक्षणको सम्बन्धमा अ-आत्म-नियमन गरिएको छैन भने, त्यहाँ धेरै जोखिमहरू छन् कि यी केही उत्पादनहरू फ्लोरिडा बजारमा राखिएको छ भने पूर्ण रूपमा परीक्षण गरिएको छैन र।
यो केवल एक रिकल लिन गइरहेको छ वा कोही वास्तविक स्टिक हुन्छ। [क्रसटलक ००:०२::01]] त्यसोभए व्यक्तिले तपाईंलाई मानिस कहाँ भेट्टाउन सक्छ?
तिनीहरूले मलाई भेट्न सक्थे, मेरो कानून फर्म www.mrcannabislaw.com हो, त्यो M-Rcannabis Law.com हो। तपाईं मलाई सबै सोशल मीडियामा #mrcannabislaw मा पछ्याउन सक्नुहुन्छ।
अति उत्तम। ठीक छ, म कार्यक्रममा आउनु भएकोमा म साच्चै धन्यवाद दिन्छु। र फ्लोरिडाले नयाँ चीजहरू विकास गर्दा, कृपया फेरि आउनुहोस् र यसमा साझा गर्नुहोस् ...
चेक आउट गर्नुहोस्:
* टम हावर्ड CannabisIndustryLawyer.com
* मिग्गी मा भांग कानूनीकरण समाचार
पाहुनाको रूपमा आउन चाहानुहुन्छ? हाम्रो उत्पादकलाई ईमेल गर्नुहोस् lauryn@cannabislegalizaitonnews.com.
आयरल्याण्डमा भांग कानूनीकरण
by Ivette | दिसम्बर 7, 2020 | आयरल्याण्डमा भांग कानून, आयरल्याण्डमा भांग कानूनीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय भांग, अन्तर्राष्ट्रिय भांग खबर, कानूनीकरण समाचार, असंगठित
आयरल्याण्डमा क्यानाबिस कानूनीकरण आयरल्यान्डमा भांग कानुनीकरण धेरै चुनौतीपूर्ण समयहरू हुँदै गइरहेको छ। युरोपमा वैधानिकता वरपरको राजनीति एकदम भिन्न छ। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रावधान छ कि मतदाताहरूलाई प्रत्यक्ष पहल मार्फत कानूनहरू परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ, अधिकतर ...
जर्जिया मेडिकल भांग उत्पादन लाइसेन्स
by Ivette | नोभेम्बर 25, 2020 | भांग कानूनीकरण समाचार, क्यानाबिस कानूनीकरण समाचार क्याना सल्लाहकार टक उद्योग, क्यानाबिस समाचार अपडेट, जर्जिया क्यानाबिस लाइसेन्स, एक क्यानाबिस व्यापार इजाजत पत्र कसरी पाउने, भांग इजाजतपत्र कसरी पाउने, कानूनीकरण समाचार, विधान, मेडिकल मारिजुआना, राज्य कानून, असंगठित
जर्जिया मेडिकल भांग उत्पादन लाइसेन्स जर्जियाले मेडिकल भांग उत्पादन लाइसेन्सको लागि आवेदनहरू स्वीकार गर्दैछ। सन् २०१ 2015 मा राज्यले मेडिकल मारिजुआनाको प्रयोगलाई अनुमति दिए पछि महासभाले मारिजुआना उत्पादन र बिक्रीलाई अनुमति दिई एक विधेयक पारित गर्‍यो ...